Dr. Tint Swe's Writings: 2016
ပို့စ်တခုကပုံကို သဘောကျတယ်။ မနေ့ပဲ သူများတွေလုပ်ထားပြီးသား ပုံတွေ၊ အိုက်ကွန်တွေကို ထပ်ချည်းတလဲ တင်နေကြတာကို ရေးမိသေးတယ်။ ကနေ့တော့ ဆွမ်းလောင်းပွဲက မုန့်ဆီကြော်နဲ့ ပဲခွေနဲ့တူတယ်လို့ ထပ်ရေးလိုက်တယ်။ ဆောရီး။
ကျွန်တော်က ကိုယ်တိုင်တီထွင်ကြံဆတာကို အားပေးတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မဟုတ်သေးလည်း ချီးကျူးတယ်။ ပုံထဲမှာ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးကရိယာတွေနဲ့ ဟက်ပီးနယူးယီးယားကို ပုံဖေါ်ထားတယ်။ ကြည့်ရတော့ လက်ယားလာတယ်။ တခုချင်းကိုကိုင်ပြီး အသုံးချချင်မိတယ်။
ကျွန်တော် ခွဲစိတ်လူနာတွေနဲ့ဝေးရတာ ၂ နှစ်ကျော်ပြီ။ ခွဲစိတ်ခန်းနဲ့ကင်းခဲ့ရတာက ၂၆ နှစ်ရှိပြီ။ ဒေလီမှာနေရတုန်းက အိုတီ ခေါ် ခွဲစိတ်ခန်းမပီသပေမယ့် ဖြစ်သလိုခွဲပေးခဲ့နိုင်သေးတယ်။
ခွဲစိတ်စရာမလိုတာကိုပါသိမှသာ တော်တဲ့ဆာဂျင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူနာမရှိတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ ခွဲဆရာဝန် = ခွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်။
ပုံမူရင်းက Medical-Online လို့ထင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ရာဝန်တွေက ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဆရာဝန်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ ၂ဝ၁၆ နှစ်ဆန်းမှာထုတ်တဲ့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးထာတာဖတ်ရတယ်။
ဆောင်းပါးက ဆေးပညာအတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ဇောင်းပေးထာတယ်။ သူတို့တိုင်းပြည်မှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဆိုရင် တွဲချင်ကြတယ်လို့ UniformDating.com ကနေ ယူနီဖေါင်းဝတ်သူတွေနဲ့ ဒိတ်လုပ်ခြင်းကို သုတေသနလုပ်လို့ သိလာတဲ့ ကောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁ဝဝဝ ထဲက အမျိုးသမီး ၃၆% နဲ့ အမျိုးသား ၂၆% က ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေကို ရွေးကြပါတယ်။ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တွေက ၂၈% + ၂၃% နဲ့ ဒုတိယလိုက်တယ်။
Shrink ခေါ် စိတ်အထူးကုဆရာဝန်တွေက မစွန်ကြပါ။ အမျိုးသမီး ၆% နဲ့ အမျိုးသား ၁ဝ% ကသာ သူတို့ကို ရွေးကြပါသတဲ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အဲလို ဂျူတီကုတ်အဖြူရောင်ဟာ လွှမ်းမိုးမှုသဘော ဆောင်တယ်။ စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ အထင်ရောက်စေတယ်လို့ ဆန်းစစ်မှုကဆိုပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ သူများတွေထက် လက်တွေ့သဘောဆန်တယ်။ အိုင်ကျူမြင့်တယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမျာ တည်ငြိမ်ကြတယ်။ သူတို့လက်တွေကလည်း အစွမ်းကောင်းတယ်လို့ပါဆိုပါသေးတယ်။ အန်စာတုံးပြစ်သလို ရွေးရာမှာလည်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို ၈၉% ကသဘောကျကြတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ နေမကောင်းတာကို ကုသရာမှာလည်း အမျိုးသမီးဆရာဝန်တွေထက် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက ၂ ဆသာကြပါတယ်တဲ့။
Kyaw Kyaw တဝမ်းပူစသတ် တစ်က သွားလေသူ ၆၂ ကြီးလက်ချက်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက ၁၉၈၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ တပြေးညီလုပ်ဘို့သာပြောတယ်။ မြန်မာစာဆရာကြီးတချို့က တစ်လိုက်ကြတယ်။ ဆရာတချို့က သဘောမတူလို့ မလိုက်နာခဲ့ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ မပြောရဲတဲ့ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တက်စစ်အစိုးရကတော့ အဲလို တစ်လို့မရေးရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးပါ။ တလုံးဘယ်လောက်ဆိုပြီး လျှော်ရသေးသတဲ့။ မပြောရဲတဲ့ခေတ် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအစိုးရလက်ထက်အထိ ကုလားထိုင်ရ မြန်မာစာဆရာများကလည်း အဲတာကိုသာ တရိုတသေလိုက်နာကြတယ်။
အဲတော့ လက်ညှိုး ၃-၄ ချောင်းထိုးမှသာ စုံစေ့ပါမယ်။ ဗိုလ်နေဝင်းလက်ထက်မှာ ယူနီဖေါင်းသတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပေါ်လစီသတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်။ အခုတော့ ကုလားထိုင်သတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်။
ပြင်လာသူတွေ များများလာလို့ အာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ မြန်မာစာမှာ နည်းနည်းတော့အားရှိတယ်။
အနီရင့်ရင့် မောင် = ဆရာက အမျိူးသမီးတွေ ဦးစားပေးဖြေကြားသလား?
ကွန်မင့်ဖတ်ရလို့ ချက်ချင်း အီးမေးလ်ကနေလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဆန်းစစ်မှု ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်ရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ် ချတ်နဲ့ မက်ဆင်ဂျာကို မလုပ်အားတော့ပါ။
1.	Thura Aung အမျိုးသား
(no subject) - ကျွန်တော် အသက် 28 နှစ်ပါ ကျွန်တော် 19 oct 2016 က သူငယ်ချင်းပေါင်းမှားပြီး
2.	Aung, me (3) အမျိုးသား
ကျန်းမားရေး အကြောင်း မေးမြန်းခြင်း - ဆေးတိုင်းမှာ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။
3.	Nant, me (2) အမျိုးသမီး
ဆရာရှင့် သမီးအသက် ၃ဝ ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၄ နှစ်ရှိပါပြီ။
4.	Phyo, me (2) အမျိုးသား
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ - သည်အတိုင်းတော့ ရောဂါတခုခုနဲ့တော့ မတူသေးပါ။ နားထောင် စစ်ဆေးမှသာ သိပါမယ်။
5.	သိမ့်, me (3) အမျိုးသမီး
6.	Myo, me (2) အမျိုးသား
7.	chothae, me (5) အမျိုးသမီး
(no subject) - font size လို့ရေးရတယ်။
8.	Rose, me (2) အမျိုးသမီး
(no subject) - ပြန်ထုတ်ထားပါတယ်လို့ ရေးရတယ်။
9.	Phay, me (5) အမျိုးသမီး
Dr. ရှင့် သည်းခြေ ကျောက်တည်တဲ့ရောဂါအကြောင်း သိပါရစေရှင့်။ သမီးအဖေ က ၅၈ နှစ်ပါ။
10.	Ei, me (7) အမျိုးသမီး
Duvadilan ဆေးအကြောင်းနှင့် Ultrasound ရလဒ် - ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ဆရာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
11.	Phyo, me (2) အမျိုးသား
12.	Alrxander, me (3) အမျိုးသား
သို့ ဆရာခင်ဗျား - 31 ရက် မနက်ခင်းကနေစအောင့်တာပါ...ဓာတ်မှန်မရိုက်ဖူးပါခင်ဗျာ.
13.	sawyuhnin095, me (2) အမျိုးသမီး
ဖြေပေးပါဆရာ ရှင့် - ဆရာ အသက်က ၁၈နှစ်ပါ
14.	sawyuhnin095, me (2) အမျိုးသမီး
ဖြေပေးပါဆရာ - ဆီးစစ်သင့်။
15.	သိမ့်, me (4) အမျိုးသမီး
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်၃၆နှစ်ရှိပါပြီ။ ကလေးပျက်တာ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ။
16.	alinkarlatt., me (2) အမျိုးသမီး
17.	ငယ်လေး, me (4) အမျိုးသမီး
ဆရာရှင့် - မျိုးဥထွက်တဲ့ရက် ဟုတ်တယ်။
18.	May, me (3) အမျိုးသား
အူကျရောဂါ - Calamine lotion ကို အလာဂျီရတာ၊ အင်ပြင်ထွက်တာ။
19.	thinzarkyaw., me (2) အမျိုးသမီး
20.	View, me (2) အမျိုးသမီး
21.	kyezin, me (3) အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီး ၃၄နှစ် -
22.	Koko, me (2) အမျိုးသမီး
ဆရာရှင့် အမျိုးသားရဲ့ သုတ်သွေးဓါတ်ခွဲအဖြေကို ပို့ပါတယ်။ ကလေးရဖို့အားနည်းတယ်လို့သိရပါတယ်။
23.	chochowin1355 အမျိုးသမီး
ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေးကအသက်၂နှစ်၁၀လရှိပါပြီ ကလေးကမွေးစကတည်းကချောင်းဆိုး
24.	Hnin, me (2) အမျိုးသမီး
ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် သမီးကရန်ကုန်ကပါ အသက် ၂၉နှစ် အိမ်ထောင်နဲ့ပါရှင့်
25.	Ye, me (3) အမျိုးသား (ဘုန်းကြီး)
(no subject) - တင်ပါ့ဘုရား။ လိုသလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘုရား။
26.	Ko Shwe Moe အမျိုးသား
ကျွန်တော် အသက် ၃၄ နှစ်၊ ကျား ပါ၊၊
27.	me, myomin (2) အမျိုးသား
Re: မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော့်အသက်(၃၄)နှစ်ပါ အခုမေးချင်တာကတော့
28.	hlahtwe73, me, hlahtwe73 (3) အမျိုးသား
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဆရာကျမ်းမာပါစေ လေးစားလျှက်
29.	may, me (2) အမျိုးသမီး
30.	golden, me (3) အမျိုးသမီး
(no subject) - ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင့် သမီးကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမယ်ရှင့် 
31.	myo, me (4) အမျိုးသား
32.	Thura, me (2) အမျိုးသမီး
(no subject) - စိုးရိမ်စရာမရှိ။ တလုံးစနှစ်လုံးစရှိပါတယ်ရှင့်။
33.	nanyellow89, me (2) အမျိုးသမီး
ဆရာ မင်္ဂလာပါ ရှင့်
34.	khaingswe, me (3) အမျိုးသမီး
35.	hnin, me (2) အမျိုးသမီး
အသက်-ရာသီ-အိမ်ထောင်ရေး မသိပါ။ တဆ
အီးမေးလ်ကနေလာတာ (၃၅) ယောက်မှာ
အမျိုးသမီး = ၂၂ ယောက်။
အမျိုးသား = ၁၂ ယောက်။
ဒေလီမှာ ယမုန်နာဆေးခန်းလေးဖွင့်စဉ်ကလည်း အမျိုးသမီးလူနာကများတာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝဝ၉ လစဉ်လူနာ တနှစ်တာ စာရင်းချုပ်
• တနှစ်အတွင်း လူနာစုစုပေါင်း (၈၆၄၉)
• တလလျင် ပျမ်းမျှလူနာ (၇၂ဝ့၇၅)
• အမျိုးသမီးလူနာ (၆၁့၆%)
• အမျိုးသားလူနာ (၃၈့၎%)
၂ဝ၁ဝ လစဉ်လူနာ တနှစ်တာ စာရင်းချုပ်
• တနှစ်အတွင်း လူနာစုစုပေါင်း (၈၆ဝ၇)
• တလ ပျမ်းမျှလူနာ (၇၁၂့၂၅)
• အမျိုးသမီးလူနာ (၆၂့၃%)
• အမျိုးသားလူနာ (၃၇့၇%)
၂ဝ၁၁ လစဉ်လူနာ တနှစ်တာ စာရင်းချုပ်
• တနှစ်အတွင်း လူနာစုစုပေါင်း (၁၁၇ဝ၄)
• တလ ပျမ်းမျှလူနာ (၉၇၅့၃၃)
• အမျိုးသမီးလူနာ (၆၄%)
• အမျိုးသားလူနာ (၃၆%)
အရင်လည်း ၂-၃ ခါလောက် စွပ်စွဲခံရဘူးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ဘက်လိုက်သောဆရာဝန်ဖြစ်၏။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ဟက်ပီးနေကြပြီ။ ကျွန်တော့်ဆီက မပီးရသေးပါ။ အခုစာရေးနေချိန်က ၃၁ ရက်နေ့ မနက်။ မနက်ထတာနဲ့ အီးမေးလ်ကမေးတာတွေကို ဖြေတယ်။ ၉ ယောက်ဆီကမေးတယ်။ ၄ ယောက်ကို သတ်ပုံပြင်ရတယ်။
၁။ ဆရာ ကျွန်မ အသက် ၅၈ နှစ်ပါ။ ဗိုက်အောင့်အောင့်နေလို့ အက်ထွာစောင်းရိုက်ကြည့်တာ သည်းခြေအိတ်မှာကျောက်တည်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်ရှင့်။့့
အာလ်ထွာဆောင်းလို့ ရေးရတယ်။ အာထွာဆောင်းလည်း ရတယ်။ စောင်း မဟုတ်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၆ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၇ လပါ ။ အိမ်ထောင်ကျစက iud ၃ လ သားအိမ်မှာ ထည့်ဖူးပါတယ်။ ၃ လပြည့်တော့ ပြန်ထုပ်ထားပါတယ်။့့
ပြန်ထုတ်ထားပါတယ်လို့ ရေးရတယ်။ ထုပ်ဆိုတာ အထဲမှာသိမ်းထုပ်ထားတာ။ ထုတ်ကမှ အပြင်ကိုထုတ်တာ။
၃။ အသက် ၂၆ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ tv ဖြစ်လို့ ဆေး ၆ လသောက်နေရပါတယ်။ တစ်ခုမေးချင်လို့ပါဆရာ။ tv ဆေး သောက်နေရင် ကလေးယူလို့ရပါသလား။ ပုံမှန်တွေးကြည့်ယုံနဲ့ ကလေးမယူသင့်တာတော့သိပါတယ်ရှင့်။ သေချာ သိချင်လို့ပါရှင့်။ နောက် အရိုး tv ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကိုလည်းသိချင်ပါတယ်။
TB တီဘီလို့ ရေးရတယ်။
၄။ ကျွန်တော် အသက် ၂၉ နှစ်ပါ။ ယောက်ျားလေးပါ။့့ လက်မှာ အနီစက်တွေ နောက်ကြောမှ အနီအဖု နည်းနည်း ထွက်လာတယ်။
မုံရွာမှာ အမျိုးတွေ မိတ်ဆွေတွေ ဆုံနေကြတဲ့ပုံ အခုပဲရတယ်။
လက်ပန်းတောင်းမှာ မီးလောင်ဗုံးဒဏ်ခံရတဲ့ ဦးတိက္ခဉာဏ။ ကျွန်တော့်ညီတဝမ်းကွဲ။
သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဦးမောင်မောင်စိုးတင့်က ကျွန်တော့်ဦးလေး။ မုံရွာ စတိတ်တူးကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်လုပ်နေတုံး ဟာဝိုင်ယီကို ပညာတော်သင်သွားရတယ်။ ကျွန်တော်က ခုနစ်တန်းအောင်ပြီး၊ နွေရာသီကျောင်းမပိတ်ခင်မှာ ဝါးလုံးထောက်အခုန်ကောင်းလို့ ဘယ်ဖက်တံတောင်ဆစ်မှာ ကျောက်ပတ်တီးနဲ့ ဦးလေးကျောင်းအုပ်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ရတယ်။
နောက်တယောက်က ဘာသာပြန်စာရေးဆရာ မောင်ရဲခိုင်။ သူ့အကိုက ကျွန်တော်နဲ့တတန်းတည်း။ လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး မြေးတွေ။
နောက်တယောက်က ဒေါက်တာဗဟိန်းက ကျွန်တော်ထက်စောပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်လိုပဲ မုံရွာစတိတ်တူးထွက်။ ဆယ်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူးပေးတာ အလွန်ရှားပါးတဲ့အချိန်သူမှာ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့အောင်လို့ ကျောင်းကထူးချွန်ကျောင်းသားသင်ပုန်းမှာ သူနဲ့ ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်တို့နာမည်တွေက ထိပ်ဆုံးက။ (ကျွန်တော် ဂုဏ်ထူးနဲ့ တခါမှ မအောင်ပါ။) No Smile!
နောက်တယောက်က ကျွန်တော်ပြည်ပထွက်ပြေးလို့ ကိုယ်စားထောင်အချခံရတဲ့ ကျွန်တော့်ညီအရင်း အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ဆရာ ဦးတင်လေး။
ဟက်ပီးနယူးယီးယားတွေ လာနေတယ်။ ဒီကနေပဲ အကုန်လုံးကို ကျေးဇူးလို့သာ ရေးပါရစေ။
ကျွန်တော့်မှာ ဟက်မပီးသူတွေကမေးတာတွေကို ဖြေနေရလို့၊ ဟက်ပီးသမားတွေကို အရေးမစိုက်အားပါ။
ဟက်မပီးသူတွေကရေးတဲ့မြန်မာစာမှာ အန်ဟက်ပီးတွေပါတော့ ကျွန်တော့်မှာ ဟက်ပီးမဖြစ်နိုင်ပါ။
နှစ်သစ်မှာ တစ်နေတဲ့ မြန်မာစာကြီး ကျန်းမာပါစေသတည်း။
မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးအသက် ၂၂ ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိတယ်ရှင့်။ အခုသမီးကလေးမွေးထားတာ ရက်နှစ်ဆယ်ရှိပြီ။ ပိတ်နဲ့ပဲဗိုက်ကိုစည်းထားတော့ အခုထိဗိုက်ပြန်မချက်ဘူးရှင့််။့့
ဗိုက်ချပ်လို့သာ ရေးရတယ်။ ချက်ဆိုတာ ဗိုက်မှာရှိတဲ့ချက်။ ထမင်းချက်။
ကလေးမရသေးတဲ့ အိမ်ထောင်သယ်တွေ၊ ကလေးလွယ်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ ကလေးအမေတွေက ကလေးအကြောင်းတွေ မေးကြတယ်။ (၁ဝ) ယောက်မှာ (၉) ယောက်လောက်က ခလေးလို့ရေးနေကြတယ်။ မှားတယ်။ ကလေးလို့သာ ရေးရမယ်။
အရင်က ကလေးရော ခလေးပါ ရေးခဲ့တာရှိတယ်။ သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာတော့ ခလေးလို့ မရှိပါ။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်တန်းတုန်းကတော့ က ကန်စွန်းပင် ရေမှာရွှင်လို့ သင်ခဲ့ရတယ်။ က ကညစ် ပေမှာခြစ်လာတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ကညစ်ကို မသိကြပါ။ နောက်မှာ က ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ် ဖြစ်လာတယ်။ အဲတာကိုအကြိုက်ဆုံးပါ။ ခလေးလို့ရေးနေသူတွေက သူငယ်တန်းစာကို မေ့လိုက်ကြတာလား မသိပါ။
ကလေးရချင်သူတွေ၊ ကလေးရတနာမွေးလာစေချင်သူတွေ၊ ကလေးကျန်းမာရေးကောင်းချင်သူတွေ ကလေးသတ်ပုံ ဂရုစိုက်ကြပါခင်ဗျား။
ဆေးစာမှာ somnambulism နဲ့ noctambulism လို့ခေါ်တယ်။ အိပ်စက်ရောဂါအုပ်စုထဲကတခု parasomnia ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်ခြင်းအဆင့်တွေထဲက slow wave sleep stage အဆင့်မှာဖြစ်တယ်။ ညဦးပိုင်းမှာဖြစ်တာများတယ်။ သတိမလစ်သေးခင်မှာ သတိရှိနေစဉ်ကလို အလုပ်မျိုးလုပ်တာဖြစ်တယ်။ ထထိုင်မယ်။ လမ်းလျှောက်မယ်။ အိမ်မှုကိစ္စတွေ လုပ်မယ်။ တချို့က ကြမ်းတမ်းမယ်။
အများအားဖြင့် လုပ်နေတာကို ထပ်လုပ်ကြတယ်။ တချို့ကသာ တမျိုးမကလုပ်တယ်။ နိုးတဲ့အခါ အဲတာကို သတိမရပါ။ မျက်စိကဖွင့်ထားပေမဲ့ အမူအယာက ထင်ရှားလှတာမဟုတ်ပါ။ ၃ဝ စက္ကန့်ကနေ ၃ဝ မိနစ်အထိ ကြာရှည်နိုင်တယ်။ တညမှာတော့ တကြိမ်သာဖြစ်တယ်။
အဲလိုဖြစ်တာနဲ့ အရက်မူးပြီးနဲ့ မူးယစ်ဆေးကြောင့်ရှောက်လုပ်တာ မတူပါ။ အရက်ကနေဖြစ်တဲ့ alcohol-induced blackout နဲ့ drug-related amnesia မူးယစ်ဆေးကနေဖြစ်တာမျိုးမှာ တုန့်ပြန်မှုရှိတယ်။ မေးတာဖြေမယ်။ မကြိုက်တာ ကြိုက်တာ ပြောမယ်။
အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်တာမှာ အမျိုးအစားခွဲတွေရှိတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်း စားတာနဲ့ sexsomnia လိင်အပြုအမူ။
လေ့လာမှုတခုအရ လူဦးရေရဲ့ ၄့၆% ကနေ ၁ဝ့၃% အထိရှိတယ်။ ကလေးတွေလည်းပါတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ တိတိကျကျမသိသေးပါ။ တချို့မှာသာ အိပ်ရေးပျက်ထားတာ၊ ဖျားနာတာ၊ မောပန်းတာတွေအခြေခံတွေ့ရတယ်။ တချို့ကတော့ မျိုးရိုးလိုက်တယ်။ chlorpromazine, perphenazine, lithium, triazolam, amitriptyline, zolpidem, Quetiapine နဲ့ beta blockers ဆေးတွေသောက်နေရသူတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်တာတွေ့ရတယ်။
ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိတယ်။ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေ။ ၁၈၄၆ မှာ Albert Tirrell လူသတ်မှု၊ ၁၉၈၁ မှာ Steven Steinberg ကနေ သူ့ဇနီးသတ်မှု၊ ၁၉၉၁ မှာ Burgess က သူ့ရည်းစားမိန်းကလေးကို ရန်ပြုမှု၊ ၁၉၉၂ မှာ R. v. Parks က သူ့ယောက္ခမကိုသတ်မှု။
ကုသနည်းမှာလည်း သေချာတာ မရှိသေးပါ။ ဆောရီး။ biperiden, carbamazepine, valproate, quetiapine, clonazepam, diazepam, flurazepam, imipramine, triazolam, melatonin, paroxetine, sodium amytal ဆေးတွေပေးနိုင်ပါတယ်။
ညမအိပ်မီမှာ ရေးကြတာတွေ့တယ်။ ဘုရားရှစ်ခိုးပြီး အိပ်တော့မယ်တဲ့။ မှားနေတယ်။ ဘုရားရှိခိုးလို့သာ ရေးရတယ်။
သြကာသရွတ်ဆိုတာကို စာနဲ့ရေးတော့လည်း မှားကြသေးတယ်။ တစ်ကြိမ်လို့ မရေးရပါ။ အဲတာတော့ နောက်ထုတ် သတ်ပုံစာအုပ်တွေကအစ မှားနေတယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = Emotion icons နားမလည်တဲ့ အရုပ်တွေ
ကွန်မင့်တခု = Zaw Lin ဆရာ ချစ်လို့ ပြောတယ် မှတ်ပါ။ ဆရာ့အနေနဲ့ ဖေ့ဘုတ်သုံးတတ်တဲ့ထိ တက်နိုလိုဂျီ လေ့လာလိုက်စားပြီးခဲ့ပြီ။ ဒီထိလိုက်လာခဲ့ပြီးမှ ဒီအီမိုတိကွန်းလေးကျမှ ပြတ်ကျပြီး ကျန်မနေခဲ့ပါနဲ့ဆရာရယ်။ ခရီးတခု ထွက်သလိုပေါ့ လိုက်ခဲ့မှတော့ ပျော်အောင်လို့နေပေါ့။ တကယ်တော့ မခက်ပါဘူး။ ဆရာက မှားပြီး အဓိပ္ပါယ် ကောက်မိမှာရယ် မှားသုံးမိမှာတွေ စိုးရိမ်နေတာ။ မသုံးခင် ကြိုပြောထားပေါ့။ ငါခုမှ စသုံးတာ ခွင့်လွတ်ကြလို့။ ဆရာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Dr. Tint Swe ဒါဆို မနေ့ကတင်တာတခုကို တယောက်က ဘာသာပြန်ပေးတယ်။ ဒေါသထွက်တာတဲ့။ နောက်တပုံမှာ ဝါးလို့သန်းဝေနေတာ။ အဲတာတွေကို ချစ်လို့လို့ ဘယ်လိုယူဆလို့ရမလဲ။
ကျွန်တော်က ဘန်းစကားတွေလည်း မတတ်ချင်ပါ။ သင်ပေးမယ်ပြောလာတာရှိပါတယ်။ ခေတ်နောက်ကျတယ်ဆိုလို့ စိတ်မခုပါ။ (အလန်း) ဆိုတာပေါ်စမှာ တယောက်က (အလမ်း) လို့ရေးတော့ သတ်ပုံပြင်ပေးခဲ့ရတယ်။ (မွတ်ငါး) ရခိုင်မှာ ကျသွားတာလည်း သိလိုက်တယ်။ (ကွကို) ကို (ကန်တော့ပါ) ဖါသာအာသာဖြစ်ခြင်းလို့ သဘောပေါက်တယ်။ မပြောကောင်းမဆိုကောင်း (ဆူဆိုက်) လို့ထင်စေတယ်။ ရှိသေးတယ့့်
အီမိုအိုက်ကွန်တွေအကြောင်း ဖတ်ပြီးပါပြီ။ တီထွင်သူတွေဖွင့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တော့ သိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပို့စ်ဆိုလိုရင်းက အိမ်မှာတင် မိသားစုချက်ပြုပ်တာနဲ့ ဆိုင်ကအစားအစာ မတူကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေလီမှာ ယမုန်နာဆေးခန်းလေးဖွင့်တုံးက မွေးလူနာတွေကို ၂ဝဝ၆ နိုဝင်္ဘာလကစပြီး မွေးပေးခဲ့တယ်။ အိန္ဒိယကနေ ထွက်လာရတဲ့အထိ ကလေးပေါင်း ၃၄၉ ယောက်ကိုမွေးပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ သားဖွားပညာကို ဘာတခုမှမသိသေးတဲ့ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီး ကြီးငယ်တွေကိုစာသင်ပေးဘို့ သင်္ခန်းစာတွေပြင်ရတယ်။ အရံသားဖွါးသင်တန်းလည်း တခါ ပေးရတယ်။ စာသင်ရင်း (မာလ်တီမီဒီယာ) နဲ့ပြတော့ ပုံမှန်မီးဖွားနည်းတွေအပြင် ရေထဲမှာကလေးမွေးနည်းလည်း ခပ်တိုတိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်။
Katharine Dawi ဆရာ နိုင်ငံခြားမှာ ရေဇလုံထဲ ကလေးမွေးတာတွေတွေ့နေရတယ် ဘာထူးခြားလို့ပါလဲဆရာ။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ရေထဲဆင်းပြီးကလေးမွေးတာ လုပ်ကြတယ်မထင်ပါ။ နေရာတကာတော့ မရောက်ဘူးပါ။ တချို့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ရေချိုးကန်ထဲဆင်းပြီး ကလေးမွေးကြတာရှိတယ်။ ယူကျုနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဗီဒီယိုနဲ့ပါတင်ကြတယ်။ ဒီ (အိုင်ဒီယာ) ကိုရတာက ကလေးဟာ မိခင်ဗိုက် (သားအိမ်) ထဲမှာ ရေမြွာရည်ထဲမယ် ၉ လ ကျော်နေလဲတာမို့ မွေးတာကိုလည်း ရေထဲမှာလုပ်ရင်ရမယ်လို့ ယူဆချက်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေထဲမှာဆင်းပြီး ကလေးမွေးရင် ကောင်းမယ့်အချက်တွေနဲ့ သတိထားစရာတွေဆိုပြီး လေ့လာလို့ရလာတယ်။
အမေအတွက် = ရေခပ်နွေးနွေးက နေရထိုင်ရတာသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ အားရှိသလိုထင်မှတ်စေတယ်။ ရေထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်သလိုထိုင်နေနိုင်တယ်။ သားအိမ်ညှစ်အားပိုပေးမယ်လို့ယူဆရတယ်။ ဗိုက်နာတာ သက်သာစေနိုင်တယ်။ သွေးဖိအားများနေတာကိုကျစေနိုင်တယ်။ စိုးရိမ်စိတ်နည်းစေမယ်။ ကလေးမွေးတဲ့အခါ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ရတဲ့ တင်ပါးဆုံနေရာက ကြွက်သားတွေကို ဆန့်နိုင်ကြုံ့နိုင်မှုပိုစေမယ်။ စုပ်ပြဲတာနည်းစေမယ်။ မွေးလမ်းချဲ့ပေရမှု နည်းစေမယ်။ ရေထဲမှာမို့ မမြင်အပ်တဲ့နေရာကို ဖုံးကာပေးသလိုမို့ စိတ်လုံခြုံမှုပိုစေမယ်။
ကလေးအတွက် = ရေမြွာရည်အိတ်ထဲနဲ့ မထူးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃ဝ ကျော်အတွင်း ရေထဲဆင်းပြီးကလေးမွေးတာက ပေါ်ပြူလာလိုဖြစ်လာပေမယ့် ဆေးသုတေသနတွေ မစုံလင်သေးပါ။ ဥရောပမှာသိထားသမျှ ရိုးရိုးမွေးကုတင်ပေါ်မွေးတာနဲ့ အန္တရာယ်တွေမထူးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Royal College of Obstetrician and Gynecologists တော်ဝင်သားဖွါးမီးယပ်ပညာရှင်တွေက သီအိုရီအရ Water embolism သွေးကြောထဲရေနဲ့ပိတ်တို့ခြင်းအန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ်။ British Medical Journal ကတော့ ၉၅% စိတ်ချရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်လို့ ကလေးဟာ မွေးလမ်းထဲမှာ ဖိအားသက်ရောက်မှုခံနေရတာဖြစ်ဖြစ်၊ ချက်ကြိုးလိမ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရင် ကလေးကထွက်ထွက်ချင်း လေရှူမှာမို့ ရေကအသက်ရှူလမ်းထဲဝင်စေမယ်။ ဖြစ်တာရှားပါတယ်လို့ ဆေးစာတွေမှာ ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကတော့ မွေးမွေးချင်ငိုတဲ့ကလေးက မငိုတဲ့ကလေးထက် များတယ်။ ငိုတာ ကောင်းတယ်။ ငိုချင်တဲ့ကလေးက ရေထဲမှာရှိနေရင် ငိုလို့မရသေးပါ။ ကလေးက လေနဲ့တွေ့မှသာ အသက်ရှူတယ်။ အသက်ရှူတာ မိနစ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ် စက္ကန့်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ် နောက်ကျမယ်။ အန္တရာယ်လို့တော့မပြောပါ။ ချက်ကြိုးမဖြတ်သေးသ၍ အောက်စီဂျင်ကို မိခင်ဆီကနေရတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ကလေးကို ရေထဲကနေထုတ်လိုက်ချိန်မှာ ချက်ကြိုးပြတ်သွားတတ်တယ်။ သတိထားရင်တော့ မဖြစ်ပါ။
ရေထဲမှာ ကလေးမမွေးသင့်တဲ့ အခြေအနေတွေ
• Herpes မိခင်မှာ ရေယုံပေါက်နေရင်။
• Breech ကလေးအနေအထားက တင်ပါးဆုံပြုနေရင်။
• Excessive bleeding သွေးဆင်းတာ များလွန်းရင်။
• Maternal infection ရောဂါပိုးရှိနေရင်။
• Multiples အမွှာဖြစ်နေရင်။
• Pre-term လမစေ့မွေးတာဆိုရင်။
• Severe meconium ရေမြွာရည်နောက်တာ များနေရင်။
• Toxemia or preeclampsia ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ရှိနေရင်။
• Hot tubs and whirlpools ရေပူနဲ့ ရေလှိုင်းလုပ်ထားတဲ့ရေချိုးကန်ဆိုရင် လုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။
မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်စာအုပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ နယူးယောက် Seven Stories Press ကနေထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ အဖုံးမှာ ဒေါ်စုမျက်နှာပုံနဲ့။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မေလမှာ ထပ်ပြီးထုတ်ဝေတော့ သံဃာတော်တွေဆန္ဒပြနေတဲ့အဖုံးနဲ့ ဖြစ်လာတယ်။
(အယ်လင် ကလီမင့်) ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ကို အင်တာဗျူးတွေ စဉ်တိုက်ဆက်တိုက်လုပ်ပြီး ထုတ်ဝေတာပါ။ စာရေးသူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တဲ့ ပဌမဆုံး အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် ဘုန်းကြီးကျောင်း တကျောင်းမှာ ၅ နှစ်နေခဲ့တယ်။
စာအုပ်ဝေဖန်ရေးသမားတွေက ဒေါ်စုကို ဗုဒ္ဓဘာသာကိုရိုသေကိုင်းရှိုင်းသူလို့ရေးကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ ဝိဉာဉ် (နမ်တရား) ပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆက်စပ်နေတာတွေပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ စာအုပ်ထုတ်ပြီးကတည်းက (အယ်လင် ကလီမင့်) မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ရာသက်ပန်ပိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းမှုရဲ့အသည်းနှလုံးထိရောက်အောင်သွားဘို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ပဌမအကြိမ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်လာအပြီး ကိုးလကြာအင်တာဗျူးတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ဒေါ်စုဟာ မေးခွန်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဖြေတယ်။ စူးစူးရှရှရှိတယ်။ မပျက်ယွင်းတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကို သူဘယ်လိုဆက်ပြီးထိန်းထားခဲ့သလည်းဆိုတာကို ဖြေဆိုခဲ့တယ်။
ဒေါ်စုရဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပေါ်အမြင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖလော်ဆော်ဖီ နှစ်မျိုးတွဲပါနေတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်လည်းပါတယ်။ ဒေါ်စုပြောပြတဲ့အမြင်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာ စာအုပ်ဝေဖန်ရေးသမားတွေ အဆိုအရ ဝိဉာဉ်ပိုင်း၊ ကျွန်တော်တို့အဆို စိတ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲ တော်လှန်ရေးလိုအပ်တယ်လို့ ဖေါ်ညွှန်းပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ ဝိဉာဉ်ပိုင်းအရပါ ညီညွတ်ရေးလို့ ဆိုလိုတယ်။
ဒေါ်စုဟာ ၆ နှစ်တာ အကျယ်ချုပ်ခံခဲ့ရတာ ပူပူနွေးနွေးသာရှိသေးပေမယ့် ခါးသီးတဲ့ခံစားချက်မျိုး ထုတ်ဖေါ်ပြောတာ ကင်းရှင်းပါတယ်။ ကျမ ဘယ်လိုမှ (နဝတ) ကို လူဆိုးတွေလို့မမြင်ပါဘူး။ တခါတခါတော့ သူတို့လုပ်တာတွေကို ကျမ စိတ်တိုတာပေါ့။ တချိန်တည်းမှာ ကျမ သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကို နားလည်နေပါတယ်။ သူတို့မှာ ကောင်းတာအတွက် ဆိုပြီး ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေကြတာပါ။ စိတ်မကောင်းစရာတော့ ကောင်းတာကို မယုံကြည်ကြတာဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အဲလောက်တောင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေ လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတာကို ဒေါ်စုက လက်နက်ကိုင်နည်းကို မလိုလားပါ။ အကြမ်းသုံးနည်းမှာ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒေဝါလီခံထားရလို့ပါ။ ဗျူဟာအရလည်း ထိရောက်မှုမရှိပါလို့ဖြေပါတယ်။
ဒေါ်စုရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်အရ တဦးတယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်ကစရမယ်။ ကိုယ်တိုင်က ဒီမိုကရေစီအတွက် အဆင်သင့် ပြင်ထားရမယ်။ နောက်အစိုးရအတွက်လည်း လုပ်ရမယ်။
ဒေါ်စုက မေတ္တာတရားတိုးပွါးစေဘို့ပြောပါတယ်။ အဲတာဟာ ပြောင်းလဲစေဘို့ရာ ခွန်အား (စွမ်းအား) ဖြစ်တယ်။ စာရေးသူကနေ ရန်ကုန်စာအုပ်ဆိုင်တခုက NLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကိုးအကားတခုကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပေးပြီး အဲဒီစာအုပ်ကို ဆုတ်ဖြဲပြစ်တယ်လို့ ဒေါ်စုကိုပြန်ပြောတော့ ဒေါ်စုက အကြောက်တရားနဲ့ မေတ္တာ ဖီလော်ဆော်ဖီကို ရှင်းပြပါတယ်။
အဲလိုဟာတွေဖြစ်နေရတာက (အက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့) ရှင်သန်နေတဲ့မေတ္တာဓါတ် နည်းသေးလို့ပဲ။ ချစ်ခြင်းနဲ့ အကြောက်တရားက တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတယ်။ (ဘိုင်ဘယ်) သမ္မာကျမ်းထဲမှာပါတယ်။ ပြည့်စုံတဲ့အချစ်ကနေ အကြောက်တရား ပေါက်ဖွားစေတယ်တဲ့။ ကျမတခါတလေ စဉ်းစားတယ်။ အဲတာဟာ သိပ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဆန်တယ်လို့။ ပြည့်စုံတဲ့ချစ်ခြင်းဆိုတာ မေတ္တာတရားပဲ။ တကိုယ်ကောင်းမဆန်ရဘူး။ တွယ်ကပ်နေတဲ့ချစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ဆီမှာ အဲလိုမေတ္တာတရားတွေ ပိုများဘို့လိုတယ်။
နှစ်သစ်ကစပြီး စစ်မှန် ရှင်သန်တဲ့ မေတ္တာတရားတွေ ပွါးများကြပါစေ။
(လင့်ခ်) ကနေ ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်ကို ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ http://www.amazon.com/The-Voice-Hope-Aung-San/dp/0140266151
နှစ်တခုကုန်လို့ နှစ်သစ်အပြောင်းမှာ တဆယ်ကနေ နောက်ပြန်ရေတွက် ရွတ်ဆိုတဲ့အလေ့အထ ရှိကြတယ်။ ပျော်စရာသဘောနဲ့ ပြိုင်တူအော်ဆိုကြတယ်။ မအော်ပဲနဲ့ ပြိုင်တူကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတာ ၃၆၅ ရက်။
ဂဏန်းတွေကို အစဉ်အတိုင်းဆိုရတာထက် နောက်ပြန်ဆိုရတာက ပိုခက်တယ်။ အပေါင်းတတ်ပြီးမှ အနုတ် သင်လေ့ရှိတယ်။ ဇန္နဝါရီလဆန်း (၁) ရက်ကစပြီး (၁) တွေ နှုတ်သွားမယ်။ ပြက္ခဒိန်တွေကိုယ်စီကို တရက်မှာ တရွက် ဆုတ်ကြရတော့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနုတ်ပုစ္ဆာသစ် စတွက်ကြပါတော့မယ်။ ဂဏန်းမတွက်တတ်သူတွေရော သင်္ချာပါမောက္ခပါ နှစ်ကုန် စာရင်းချုပ်ကြရင် အဖြေတူထွက်တယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်သစ်နဲ့လုပ်ရင် ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဆရာ ကျမ မိတ်ဆွေ အသက် ၂၈ ရှိပါပြီ။ ယခု အပတ်ထဲမှာ ကလေးမွေးဖွားပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ကလေးက ပေါင်မပြည့်ဘဲ (၂) ပေါင်တည်း မွေးလာတယ်ဆရာ။ နောက်ပြီး တင်ပါးဆုံကဖွားတယ်။ OG နဲ့လည်းသေချာပြခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်က တစ်ခါလဲကျဖူးပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပေါင်မပြည့်ရတာပါလဲ။ ကလေးအသက်ရှင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ဘာကြောင့်တင်ပါးဆုံကမွေးတာလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဆရာဖြေပေးစေချင်ပါတယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာရှင် ဆရာတင်ထားတဲ့ ကလေးပြာပြီး CPR နဲ့ အသက်ကယ်နိုင်ခြင်းကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒီပိုစ့်က ကျမတူမလေးဖြစ်နေပုံနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ comment ဝင်မေးထားပါတယ်ဆရာ။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးဖို့ ဆရာ့အတွက် အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာ နောက်မှသတိထားမိပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့စည်းကမ်းကို ချိုးပေါက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ရှင့်။ တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။ ကျမက Apr 18, 2015 မှာ ကျမမောင်လေးရဲ့မိန်းမရေမွှာပေါက်ပြီး လမစေ့ပဲ အရေးပေါ် ကလေးခွဲမွေးရမမယ့် အကြောင်းများကို ဆရာ့ထံအကူညီတောင်းခံ မေးမြန်းခဲ့ဖူးပါတယ်ရှင်။ ဆရာ့ရဲ့အချိန်မီ ပြန်စာများ ကျေးဇူးကြောင့် ကလေးကို အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။
အခုကလေးမွေးပြီး ၃၄ ရက်ကျော် ညပိုင်းမှာ ကလေးက နို့ဘူးသောက်ရင်း အိပ်ပျော်သွားပြီးမကြာခင်မှာ ငယ်သံလိုလို အော်ငိုတဲ့အသံတချက်ထွက်လာပြီး တကိုယ်လုံးပြာအသက်မရူတော့ပါဘူး။ အိမ်သားအားလုံးလန့်သွားပါတယ်။ မွေးလာပြီးကတည်းက တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါရှင်။ ဖခင်ဖြစ်သူက ကလေးပါးစပ်မှလေကိုစုတ်လိုက် မှူတ်လိုက် တစ်မိနစ် ကျော်ကြာလုပ်ပေးမှ ကလေးငိုသံပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့အမြန်ဆေးရုံခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အောက်စီဂျင် တည ပေးထားရပါတယ်။ ဆရာဝန်များကတော့ နို့သီးလို့ဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံတက်နေရင်း ကလေးက ငိုနေရာမှ အသံမထွက်တော့ပဲ အသက်ရူရပ်သလိုဖြစ်ပြီး ပြာလာပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်တော့ ဆရာဝန်က ကလေးကိုပွေ့ချီပြီး တင်ပါးကိုရိုက်လိုက်တော့မှ ကလေးငိုသံပြန်ထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ ဖန်ပေါင်းအိုးထဲမှာ ၂ ရက် အပူပေးထားရပါတယ်ဆရာ။ ပိုးသတ်ဆေးထိုးပေးပါတယ်။ ဆေးရုံ ၇ ရက် တက်ရပါတယ်ရှင် ကလေးကိုနို့တိုက်ပြီးရင် ခေါင်းထောင်ပေးရမယ်လို့ မှာကြားပါတယ်။ အားလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုကလေး ၂ လ ၈ ရက်ရှိပါပြီဆရာ။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ ငိုနေရာမှအသံမထွက်တော့ပဲ ကလေးပြာလာပြီး အသက်ရှူရပ်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်ဆရာ။ ကလေးမိခင်က ကလေးပါးစပ်ကိုစုပ်ပေးလိုက်တော့မှ ငိုသံပြန်ထွက်လာပါတယ်။ ဒီကနေ့လည်း တခါထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံမှဆင်းလာပြီး ယနေ့အထိဆိုရင် ၆ ကြိမ်ထက်မနည်း ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲရှင့်။ ကလေးအရွယ်ရောက်တဲ့အထိ အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်ပါသလားရှင့်။ ကလေးမိခင်က နို့ရည်နဲနဲလေးမှမထွက်လို့ ကလေးကို မွေးကတည်းမှ အခုထိနို့ဘူးတိုက်နေရပါတယ်ရှင်။ နို့ရည်ထွက်ဆေးသောက်၊ ဟင်းရည်မျိုးစုံလုပ်သောက်ကြည့်လည်း မထွက်ပါဘူးရှင်။ တူမလေးက အိပ်နေချိန်မှာ ဟောက်သံလိုလို ချွဲသံလိုလိုနဲ့ အမြဲထွက်နေတတ်ပါတယ်ဆရာ။ ဆေးရုံပြကြည့်တော့ အဆုပ်အားလုံး ကောင်းနေပါတယ်တဲ့၊ ချွဲကျဆေးပေးလာပါတယ်။ ကလေးကို အခုညခင်းမှာ တိုက်ကြည့်တော့ ဆေးများကို အန်ထုတ်ပါတယ်ဆရာ။ အချိန်အတော်ကြာအောင်ကလေးက အန်ထုပ်နေပါတယ်။ ကလေးကအရမ်းငယ်တော့ မအန်နိုင်ဖြစ်နေလို့ ပါးစပ်မှစုပ်ထုတ်ပေးရပါတယ်ရှင်။ ကလေးလေးခမျာ တော်တော်လေး ပင်ပန်းသွားပါတယ်ရှင်။ ဘယ်လိုဆက်ပြီး ပြုစုသင့်တယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါဆရာ။ ဆရာ့ကို အားကိုးပါတယ်ဆရာ။ ကလေးအတွက် ဘယ်လိုဆိုးကြိုးဖြစ်နိုင်မှာလဲဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင်။
နေ့စေ့လစေ့ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ ၃၉ ပတ်ကနေ ၄၂ ပတ်အတွင်းမွေးတာကိုခေါ်တယ်။ ၃၇ ပတ်ထက်စောမွေးတာကို လမစေ့ကလေးခေါ်တယ်။ မွေးမွေးချင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၅ ပေါင်ခွဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ၂ ကေဂျီခွဲ ထက်နည်းတဲ့ကလေးကို အလေးချိန် မပြည့်တဲ့ကလေးခေါ်တယ်။
ကလေးစောမွေးခြင်းကို ကာကွယ်ဘို့ ကိုယ်ဝန်ကတည်းက (ပရိုဂျက်တီရုန်း) ဟော်မုန်းတမျိုးကို ၃၂ ပါတ်နောက်မှာ ပေးရတတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တယ်။ (ပရိုဂျင်စတီရုန်း) ကနေ သန္ခေသား ဖွံ့ထွားစေဘို့ကူညီတယ်။ သန္ခေသားက သားအိမ်အတွင်းလွှာမှာ လာကပ်ပြီးတာနဲ့ ဆက်ပြီးတည်မြဲနေစေဘို့ လိုအပ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၈-၁ဝ ပါတ် နောက်မှာ အချင်းဖြစ်လာပြီး (ပရိုဂျင်စတီရုန်း) ထုတ်ပေးဘို့ တာဝန်ယူလာတယ်။
မေးခွန်းထဲက ကလေးမှာ Apnea အသက်ရှူရုတ်တရက်ရပ်တာ၊ နှလုံးခုန်နှေးသွာတာနဲ့ အောက်စီဂျင်နည်းတာကို အထူး သတိထားနေရမယ်။ အသက်ရှူအခက်အခဲဖြစ်လာရင် လေမှုတ်သွင်းတာရပါတယ်။ အရှိန်အား အသင့်အတင့်သာ သုံးပါ။ ခေါင်းကို ဇောက်ထိုးလုပ်၊ ကျောပုတ်ပေးတာလည်း လိုလာရင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးကို အထူးခန်းမှာထားနေစဉ် မိခင်နဲ့ အသားချင်းထိုကိုင်မှုလုပ်သင့်တယ်။ အားပေးချင်တာက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာလော သက်သာလာလေဖြစ်ပါမယ်။ ပြုစုသူတွေက စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ပါစေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆရာဝန်ဆရာမတွေလိုပြုမူပါ။ ဆိုလိုတာက အရေးကြုံလာချိန်မျိုးမှာ သနားစိတ်နဲ့ စာနာစိတ်ကို လိုတာထက်မပိုစေပါနဲ့။ ပညာနဲ့ ဝီရိယ မပေါ့နဲ့။ ကံတရားဆိုတာ ဆန်းကြယ်တယ်။
Ant Bwe Kyaw မဆလ ခေတ်တုန်းကမှ ဆရာဦးထင်ဖတ် (ခေါ်) ဆရာ မောင်ထင်တို့ ဦးကိုယု (ခေါ်) မောင်ကိုယုတို့က သရော်စာ satire ရေးခဲ့ကြသေး။ အခုခေတ်မှာ ရေးမယ့်သူ ပီပီပြင်ပြင် မရှိ။
ဟာသဉာဏ်နဲ့ သရော်စာမတူပါ။ သရော်တာမှာ ဝေဖန်ကန့်ကွက်တာနဲ့ ရှုံ့ချတာပါတယ်။ ကျွန်တော် စာရေးတာမှာ တခါတခါ ဟာသလေးနှောတာကို သရော်စာမမြောက်ဘူးလို့ အပြောခံရဘူးတယ်။ ကျွန်တော်က သူများကို သရော်တာမျိုးကို မကြိုက်ပါ။ စစ်အုပ်စုကိုတောင်မှ ခပ်ထေ့ထေ့သာရေးတယ်။ ရေးပြီးရင် အားနာနေတတ်သေးတယ်။
သူများကို သရော်လို့၊ ရီစရာပြောလို့ ဘာအကျိုးရမလဲ ကြည့်သင့်တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သရောသလိုလိုတွေက များလွန်းတယ်။ ခနိုးခနဲ့ရေးတာ၊ အပုပ်ချတာ၊ မထိတတိကလိတာတွေကို ဘယ်သူရေးသလဲ ကြည့်တာနဲ့ ရယ်စေချင်တဲ့ စေတနာလား၊ ပြုပြင်စေလိုတဲ့ စိတ်ထားလား သိတယ်။
ရီစရာပြောကြတာမှာ အနှောင့်အသွားလွတ်တာမျိုးဆို ပိုကောင်းတယ်။ လူအများဖတ်နိုင်အောင်ပြောတာ၊ ရေးတာမျိုးဆိုရင် ချက်အောက်မရောက်ရပါ။ ရီစရာမှာ မယဉ်ကျေးရင် အောက်တန်းကျတယ်။
ကျွန်တော်က စာသင်ပေးရင်း မပျင်းရအောင်၊ မှတ်မိအောင်၊ တခြားအရာတွေနဲ့ ခေါင်းပူနေချိန်မှာ ပေါ့ပါးသွားအောင် ရီစရာသဘော ပြောလေ့ရှိတယ်။ ပညာဉာဏ်နည်းသူတွေကနေ မှားလုပ်၊ လွဲပြောတာကို ရီစရာလုပ်တာမျိုးက မသင့်ပါ။ စိတ်ဝေဒနာသယ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ထိထိမိမိဖြစ်တဲ့ဟာသ အများကြီးရှိတယ်။ ငါကမှ နပိုလီယန်အစစ်ဆိုတဲ့ ဟာသကို ပြောဘူးပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာသည်တွေကို နှိမ်သလိုပြောတာ မကောင်းဘူးလို့ ယူဆလာပါတယ်။ တခြားရောဂါတွေလည်း အတူတူဘဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ မျိုးပွားလမ်းရောဂါစာတွေအောက်မှာ ကွန်မင့်ရေးတာတချို့ကို ဖျက်ရတယ်။ တချို့ကို ဘလော့လုပ်ရတယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာစာမှာ ကံမကောင်းပါ။ ၁၉၉၁ ကတည်းက အတူနေရသူတွေက ဗမာစကားတတ်တဲ့သူနည်းလို့ စကားကို တမင်တကာ ချပြောရတယ်။ စာရေးရင် လျှော့ရေးရတယ်။ ကျွန်တော့်မြန်မာစာ မတိုးတက်ပါ။ ရီစရာသဘော ပြောပြီးရင်လည် ဘာသာကပြန်ပေးရသေးတော့ မရီရတဲ့အပြင် ရီတောင်ရီရသေးဆိုသလို။ ဆေးစာတွေသင်တဲ့အခါ ရီစရာထည့်ရင် ပိုမှတ်မိတယ်။ လက်အိတ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ။ Love ရှေ့ကနေ G ထည့်လိုက်ပါ။ တယောက်က မှန်ကြိုက်သူသီချင်းတင်တော့ မှန်ပဲကြိုက်နော်လို့ ရေးလိုက်တယ်။ ဗမာမဟုတ်တဲ့ဆရာမလေးတွေကို ဘီးကြိုက်ကို ပြောင်းပြန်ဖေါ်ပေးတာတောင် လိုက်မမီကြတော့ ခက်ရော။ သူထင်နေတာက ကြိုက်ဘီးတဲ့၊ ပြီးကြရော့။
Nurse Post Chat and Comments သူနာပြုတယောက်နဲ့ ချတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ ကွန်မင်း နှစ်ဆယ်ရရှိခြင်း
ဒေါ်ခင်ကြည်နှစ်လည်နေ့မှာ ဒီစာတိုရေးခဲ့ပါတယ်။ မဟာသီရိသုဓမ္မ ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ သူနာပြုဆရာမတဦးပါ။ နောင်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ တယောက်မေးရာကနေ စရေးဖြစ်တာ။့့။့့။
• သူနာပြုသင်တန်းကို ဆရာစိတ်ဝင်စားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လိုလည်းတော့ နည်းနည်းမှမသိပါ။ သူနာပြုတွေကို စာသင်မပေးဖူးပါ။ သင်တန်းကျောင်းထဲလည်း တခေါက်မှမရောက်ဖူးပါ။
• ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒီမှာ သူနာပြုနဲ့ သားဖွားသင်တန်းကျောင်းပေါင်း ၅ဝ ရှိပါတယ်။ တချို့က တွဲရက်ကျောင်းနဲ့ တချို့က သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း သီးသန့်ပါ။ ဒီပလိုမာ ၃ နှစ်ကျောင်းသားတွေကို မွေးထုတ်ပါတယ်ဆရာ။ ဆယ်တန်းမှာ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သုံးဘာသာပေါင်းအမှတ် အနည်းဆုံး ၁၉ဝ ရရပါမယ်ဆရာ။ အဲဒါက သူနာပြုပါ။ သားဖွား ဒီပလိုမာကတာ့ ၂ နှစ်တက်ရပါတယ်။ စုစုပေါင်း သုံးဘာသာရမှတ် ၁၈ဝ ရှိရပါမယ်ရှင့်။ ဒါပေမယ့် သင်တန်းကျောင်းရှိတဲ့ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက် အမှတ်သတ်မှတ်ပုံ အနည်းအများ ကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ရှင့်။ သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းအုပ် နည်းပြ ဒုနည်းပြဆိုပြီး သင်ကြားရေးပိုင်းမှာ ခန့်ထားပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မက သူနာပြုတက္ကသိုလ် မန္တလေးကဆင်းတဲ့ B.N.Sc (Generic) တယောက်ပါဆရာ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ပညာသင်နှစ်က စုစုပေါင်း ၄ နှစ်ပါဆရာ။ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပြီး ကျောင်းလခ ပေးတက်ရတဲ့အပြင်အဆောင်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသူပါဆရာ။
မြန်မာပြည်မှာ သူနာပြုကိုပဲ အမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီး ကွန်ဖလစ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးပါဆရာ။ သူနာပြု တက္ကသိုလ် သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း B.N.Sc (Generic), B.N.Sc (Bridge) ဆိုပြီး ကွဲထွက်ပါတယ်ဆရာ။ တက္ကသိုလ်က ဆင်းရင် Bechelor နဲ့ သင်တန်းကျောင်းကဆင်းရင် Diploma ဆိုပြီး ထပ်ကွဲတယ်ဆရာ။ တက္ကသိုလ် တက်တဲ့သူတွေက ဆယ်တန်းမှာ အမှတ်ပျမ်းမျှ တစ်ဘာသာ 80 ရမှ တက်လို့ရပါတယ်။ Diploma သင်တန်းသားတွေကတော့ အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးလစဉ် ၁၅ဝဝဝ ကျပ်၊ သားဖွားသင်တန်းသူက လစဉ် ၁ဝဝဝဝ ကျပ် အစိုးရက ထောက်ပံ့ပါတယ်။ သူနာပြုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေကတော့ ကျောင်းလခ ပြန်သွင်းပြီးတက်ကြရပါတယ်။ ဘယ်ကျောင်းကပဲဆင်းဆင်း အလုပ်ဝင်ရင် Trained Nurse အနေနဲ့ စပြီးအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ လစာကတော့ စာရေးလခ ပဲရပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
• ဟုတ့့် ဆရာအခုပဲ ဆေးရုံတခုကနေပြန်လာတယ်။ သူနာပြုတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ သူတို့ပဲ။ လူနာတယောက်အခန်းမှာ စက်ကိရိယာ၊ မော်နီတာ၊ ကွန်ပြူတောတွေ အစုံအလင်နဲ့။ အလုပ်တွေ အတော်များများကို သူနာပြုတွေက လုပ်ကြတယ်။ သူနာပြုတယောက်က ဆက်သွယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ နာမည်ကို ကွန်ပြူတာထဲသွင်းယူတယ်။ နောက် ၂ ယောက်လောက်က လူနာအိပ်ယာခင်း စတာတွေ လဲပေးတယ်။ ပြန်ကာနီး လူနာကရုန်းထလို့ သွားပြောတော့ ယောက်ျားသူနာပြုတယောက်ကလာကြည့်တယ်။ ICU မှာပေါ့။ လူနာစောင့် ထားစရာမလို၊ ဖုန်းဆက်ပြီး အချိန်မရွေး သွားကြည့်နိုင်ကြတယ်။ ဆက်ဆံရေးမှာ သဘောကောင်းသူ၊ မကောင်းသူမျိုး နှုတ်အာကြမ်းသူနဲ့ ချိုသာသူမျိုးမဟုတ်ပဲ သင်ကြားပေးတာအရရော တာဝန်အရကိုပါ စိတ်လိုလက်ရ လုပ်ပေးတတ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ လူကဲခတ်ရတာမခက်ပါ။ တခြားဆေးရုံတွေ၊ ဆေးခန်းတွေကိုရောက်တော့လည်း သည်အတိုင်းချည်း တွေ့တယ်။ လုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင် လူမှုဆက်ဆံရေးကို လိုလေးသေးမရှိပါ။ လူနာ့ဇနီးက Faint ရတာကို သူနာပြုတယောက်က ထိုင်စရာနေရာပေးတယ်။ Juice, tissue paper ယူလာပေးတယ်။ စကားပြောတယ်။
ဆေးရုံကတော့ ကြယ်ငါးပွင့်ဟော်တယ်လိုပေါ့။ ဒေလီမှာလည်း အဲလိုပျံနေအောင်လုပ်ထားတဲ့ ဆေးရုံတွေတိုင်းလိုလိုကို ဆရာရောက်ဖူးခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်အဆင့်အတန်းအလိုက် အနှစ်သာရမှာ ကွာခြားကြတယ်။ ယူအက်စ်မှာက သူနာပြုတွေမှာ လစာလည်းကောင်းကြတယ်။ ဝင်ငွေအရများလေ အခွန်ဖြတ်တာများလေမို့ တချို့ဆိုရင် ရိုးရိုးဆရာဝန်ထက် သူနာပြုကို ပိုလုပ်ချင်ကြသတဲ့။ တတ်လည်းတတ်ကြတယ်။ ဝတ်ကျေတန်းကျေသဘော မရှိပါ။ အထင်သေးခံရခြင်းလည်း မရှိပါ။ အဲတာကို အတော်သဘောကျတယ်။
• ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ။ မြန်မာပြည် သူနာပြု လောကမှာ အဘက်ဘက်မှ လိုအပ်ချက်တွေကြားထဲကနေ ကျွန်မတော့ စွမ်းဆောင်နိုင်သလောက် ကျောင်းသားများကို knowledge, attitude, practice ရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင့်။ ဆရာ့ရဲ့ အသိပညာမျှဝေမှုနဲ့ လမ်းညွှန်မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
• ဟုတ့့် ဆရာဖြစ်စေချင်နေတာက ဗမာပြည်မှာ (သူနာပြုအတတ်ပညာ + ဖြည့်စီးမှု + စိတ်ထားစေတနာ) ပိုကောင်းစေချင်တာပဲ။ သူနာပြုတွေကို ပညာသင်ပေးသူတွေက အတတ်ပညာ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက စိတ်ထားစေတနာနဲ့ ဖြည့်စီးမှုက တိုင်းပြည်အဆင့်အတန်း (လူတွေရဲ့အဆင့်အတန်း)၊ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အရေးကြီးသာဖြစ်နေတယ်။
• မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်မ အသက် ၃၃ နှစ်၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းက နည်းပြ (tutor sister) ပါ။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက စာများများ ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်ဆရာ။ အမျိုးအစားအကုန်ပါ နိင်ငံရေး၊ ရသ၊ အတွေးအမြင်၊ ကာတွန်း၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဘာသာပြန်၊ ဝထ္ထု၊ စွယ်စုံကျမ်း၊ ဇာတ်နိပါတ်၊ တော်တော်များများ ရသစုံဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ။ အချစ်ဝထ္ထုတော့ မဖတ်ရပါဘူးဆရာ။ အဖေခွင့်မပြုလို့ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာလည်း အဲဒီ အချစ်စာအုပ်တွေကို မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ပေါ့တိမ်တယ်လို့ ခံစားရလို့ပါ။ အခုပြောချင်တာကဆရာရယ် စိတ်ထဲမှာအသိပညာရစေနိုင်တဲ့ personality change သွားစေနိုင်လောက်တဲ့ စာပေမျိုး ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကူညီပြီး လမ်းညွှန်စေချင်ပါတယ်။ ဆရာ့ကို လေးစားလျက်ပါ။
• ဟုတ့့် ပြောပြတာတွေက မှန်တယ်။ ငယ်ဘဝစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ အရွယ်ရလာချိန်စိတ်ဝင်စားမှု မတူပါ။ ငါပြောင်းရမယ်လို့ စိတ်မှာ သဘောမထားပဲ စာဖတ်စေချင်တယ်။ စာရွေးတာကောင်းတယ်။ နာမည်ရစာရေးဆရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ နာမည်တွေတော့ မရေးလိုပါ။ ကျန်မှစိုးလို့။ ဖတ်လက်စစာတွေပဲ ဆက်ဖတ်စေချင်တယ်။ သမိုင်းမှန်ဖတ်သင့်တယ်။ နာမည်ကြီးတိုင်း၊ ထုတ်ဝေတာများတိုင်းတော့ မသင့်ပါ။ စာဖတ်ပြီး စဉ်းစာပါ။ ကောင်းမယ်လို့ထင်တာ လိုက်နာပါ။ စိတ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားပါ။ တသမတ်တည်း စာတမျိုးကိုမဖတ်ပါနဲ့။ တည်တာဖတ်ပြီး၊ ရီစရာဖတ်လိုက်ကောင်းတယ်။ ဆရာက ဆရာလုပ်နိုင်အောင်အထိ တတ်သိသူတော့မဟုတ်ပါ။ တချို့စာတွေကို ဖတ်ပြီး ဖယ်ထုတ်လိုက်ရတတ်တယ်။ ဥပမာ အခု ဆရာရေးတာမျိုးလည်း ကိုယ့်မလိုရင် ဖတ်ပြီးဖယ်ထားလိုက်ပေါ့။ ဆရာကတော့ စာဖတ်သူတွေကို အားပေးတယ်။ မြန်မာပြည်ကသူနာပြုတွေကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ဒီစာကို ၂၇-၁၂-၂ဝ၁၅ နေ့မှာတင်ခဲ့တယ်။ အခုထိ ကွန်မင့် (၂ဝ) ရေးတယ်။ ရေးတဲ့သူတွေက ဘယ်လိုစေတနာနဲ့ ရေးကြသလဲ။
1. Kyaw Thein Mayhka မြန်မာပြည်ကသူနာပြုတွေဝင်ငွေကောင်းကြတယ်ဆရာ ကျနော်အိမ် တောင်ဘက် ကပ်လျက်ကသူနာပြုကအိမ်ဝင်းဝယ်နိုင်တယ်တိုက်ဆောက်နိုင်တယ် မြောက်ဖက်ကဆရာဝန်မ အိမ်ဝင်းမဝယ်နိုင် RIT သူငယ်ချင်း ငါးခြောက်ဆိုင်မှာအလုပ် လုပ်ရတယ် အိမ်ရှေ့ကGTI ဆင်းက တိုက်ဆောက် ကားစီးတယ်ဆရာ
2. Kyaw Thein Mayhka Thida Khin မယုံလို့ လား တောင်ဘက်ကအိမ်ဝင်းငင်းက ငါရောင်းထားတာ တယောက်ကို သုံးထောင် ဆယ်ယောက်ဆိုတွေးကြည့်ဆေးဖိုးအဲလောက်မကုန်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိ
3. Marlar Shein သူနာတာကိုအမြဲပြုရ ကိုယ်နာနေရင်ဂရုမစိုက်အားကြတဲူ့သတွေပါ
4. NH Doreamon ထောက်ပံကြေးတစ်လ ၃၀၀ :) :)
5. Tint Swe ၁၉၇ဝ ဝန်းကျင်တုံးက ဟောက်ဆာဂျင်လစာ ၂၁ဝ ကျပ်တိတိ။
6. Ni Eang ခု 2015 ထိကဝတ်စုံစရိတ် မရသော၃၅ ကျပ် ပါရှင့်
7. Paing Thit သူနာပြုတွေပုံကမျက်နှာမပါဘူး နော်
8. Tint Swe မြန်မာပြည်ကပုံတွေသုံးရတာ အတော်ကြီး သတိထားရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း မရိုက်နိုင်။ သူများပုံ သုံးရင် ခွင့်တောင်းရတယ်။ မော်ဒယ်နဲ့ရိုက်တာမျိုး မသုံးပါ။
9. Thidar Oo ခြံဝယ် တိုက်ဝယ် ဆုတဲ့ထဲကျမတို့မပါ ပါဘူးရှင့် ပင်စင်ယူရင်နေစရာမရှိလို့ ဘယ်ဘိုးဘွားရိပ်သာ သွားရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေရပါတယ်ရှင့်
10. Thida Khin ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ဆရာကြီးတို့ မိသားစု ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းမြေ့ ကြပါစေရှင်...
11. Nan Dar တချိန်က သူနာပြုဆိုတဲဂုဏ်ကိုရူးခဲ့ပါတယ်ဆယ်တန်းအမှတ်ကပဲဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်
12. Aung Zaw Latt မြင်တာတော့မြင်တယ်...ဟဲ...ဟဲ
13. Koko Lay လေးစားပါတယ်မိတ်ဆွေ
14. Žâý Ýâŕ Ťõė ကျနော်သူနာပြုတစ်ယောက်
15. Lway Greentea ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး မျှဝေခွင့်ပြုပါရှင့်
16. Pyay Soe Aung လူအမျိုးမျိုး ရှိမှာပေါ့
17. Mar Lar Yi ပိုပြီးသိရလို့ ကျေးဇူးပါဆရာ
18. Zin Wai Hnin မျှဝေခွင့်ပြုပါ
19. APril MAy ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
20. Myat Myat ကျေးဇူးပါ ဆရာကြီး
21. Cho Thet BNSc လဲဒီလစာ Diploma လဲ ဒီလစာ အနီဝတ်လဲ ဒီလစာ အပြာဝတ်ဒီလစာ မကွာတာကတော့ သူနာပြုလောကပါ ဒေါ်စုအမေ ဒေါ်ခင်ကြည်ကသူနာပြုတယောက်မို့ သူနာပြုတွေကိုကိုယ်ချင်းစာပြီးပြောင်းလဲပေးမှာလား
22. Ye Myint ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ ဆရာကြီးမိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
အီစထိုဂျင်ကို အမျိုးသမီးဟော်မုန်းလို့လူသိများတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာသာရှိတာတော့ မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးတွေမှာ မိန်းမနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေဖြစ်လာစေဘို့ အီစထိုဂျင်ဟော်မုန်းလိုတယ်။ မျိုးပွါးဘို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်။ မျိုးဥအိမ်တွေကနေ Estrone, နဲ့ Estradiol အများဆုံးထုတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ Estriol ကို အချင်းကနေ ထုတ်ပေးတယ်။ ကျောက်ကပ်အထက်မှာရှိတဲ့ အဒရီနယ်လင်ဂလင်းကနေလည်းထုတ်ပေးတယ်။ အဆီတစ်ရှူးတွေကပါ ထုတ်ပေးတယ်။ ရင်သားနဲ့ သားအိမ်တွေကိုသာမက ဦးနှောက်၊ အသည်း၊ နှလုံးတွေကိုပါသက်ရောက်တယ်။ သူ့ကြောင့် ရာသီဖြစ်စဉ်မှာ သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာကို ကြီးထွားလာစေတယ်။
Progesterone ပရိုဂျက်စတီရုန်းဟော်မုန်းနဲ့ မျှခြေညီနေရင် ကျန်းမာတယ်။ ရာသီမှန်မယ်။ မျိုးပွါးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေထဲမှာ ပါတယ်။ ဟော်မုန်းမူမမှန်ရင် တချို့ကို အိမ်ထောင်မရှိလည်း တားဆေးပေးရတယ်။ အရိုးပါးတာကို သက်သာစေတယ်။ ကယ်လ်စီယန်၊ ဗီတာမင်ဒီနဲ့ အီစထိုဂျင်တွေတွဲပြီး အရိုးကိုအားကောင်းစေတယ်။ အသက်ရလာတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်း (၃ဝ ကျော်) မှာ ဒီဓါတ်သုံးမျိုးလိုတယ်။ အထူးသဖြင့် သွေးဆုံးပြီးရင် လိုကြတယ်။ အီစထိုဂျင်နည်းရင် ဗဂျိုင်းနာအဖုံးလွှာပါးပြီး ခြောက်သွေ့လာမယ်။ ဆီးသွားပြွန်လေးကိုလည်းသက်ရောက်တယ်။ အားနည်းရင် ဆီးအောင့်မယ်။ သွေးဆုံးကာနီးလာရင် ရာသီမမှန်ဖြစ်မယ်။ ရင်သားနာမယ်။ စိတ်မူပြောင်းမာယ်။ မျက်နှာနီမြန်းမယ်။ ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသနည်း လုပ်ရတယ်။
အပျိုဖြစ်နောက်ကျတာ၊ ဗဂျိုင်းနားမဖွံ့ဖြိုးတာ၊ သွေးဆုံးချိန်စောလွန်းတာ၊ ရာသီမမှန်တာနဲ့ သွေးဆုံးရောဂါတွေအတွက် အီစထိုဂျင်တမျိုးတည်းပေးနည်းနဲ့ အီစထိုဂျင် + ပရိုဂျင်စတီရုန်းတွဲပေးနည်းတွေရှိတယ်။ သတိတော့ထားရမယ်။ ဟော်မုန်းအလေးချိန် အနည်းဆုံးသာပေးဘို့ ၂ဝဝ၂ ကစပြီး ထုတ်ပြန်ထားတယ်။
ပြည်ပမှာသာနေရတဲ့သူ ပြည်တွင်းကို နေလှမ်းမျှော်ကြည့်နေပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးမှာ ဆီခမ်းသွားတာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ကြောင့်ပါ။ မီးစာတော့ မကုန်သေးပါ။ အဲဒီအပြောင်းအလဲမှာ အပြင်နေလုပ်သူတွေက ပရိသတ်ဖြစ်သွားရတယ်။ တချိန်တုံးကတော့ ပြည်တွင်း-ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးရယ်လို့ လှိုင်းတိုရေဒီယိုသာရှိခဲ့တယ်။ နဂိုကတည်းကရှိပြီးသာ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေနောက်မှာ အာရ်အက်ဖ်အေနဲ့ ဒီဗွီဘီ ပေါ်လာတယ်။ ဒီဗွီဘီကပိုစောတယ်။ ဒီဗွီဘီစလွှင့်တဲ့ရက်က အာဇာနည်နေ့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ နယူးဒေလီမြို့ ဗီကပ်စ်ပူရီအရပ်ထဲမှာ အိမ်အောက်ထပ်ကိုငှားနေခဲ့ကြတုံးက ဝိုင်းစုပြီးနားထောင်ခဲ့ကြတာကို အမှတ်ရတယ်။
ဒီဗွီဘိ နယူးဒေလီ စတူဒီယိုဖွင့်ပွဲမှာ စကားပြောရတယ်။ ချင်းတွင်းစတူဒီယိုလို့ အမည်ပေးထားတယ်။ ပြည်ပကအသံတွေ ပြည်တွင်းကို ရောက်စေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော့်အသံလည်း ပါလေ့ရှိတယ်။ နောက်တော့ ဒီဗွီဘီက တီဗွီအစီအစဉ်ပါ ဖြစ်လာတယ်။ ရုပ်ကိုပါဖန်သားပြင်မှာ ကျွန်တော်အော်အော်ပြောနေတဲ့ပုံတွေ ကြည့်ရတယ်လို့ မိတ်ဆွေတွေက လှမ်းပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်သေပြီလို့ သတင်းထွက်ထားတာမို့ ပြန်မြင်ရလို့ အမျိုးတွေကဝမ်းသာကြသတဲ့။
ပြည်ပမှာ အစည်းအဝေးတွေ လုပ်ကြတယ်။ လူ ၂ ယောက်လောက်သာနေနိုင်တဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ ၁ဝ-၁၅ ယောက် ထိုင်ပြီး စည်းဝေးတာလည်းရှိတယ်။ ဖိုက်စတားဟော်တယ်မှာလည်း လုပ်တဲ့အခါလုပ်ကြတယ်။ မိုးရွာထဲ ထီးဆောင်းသွားရတာ ရှိသလို ဘိုးရင်းလေယာဉ်ပျံကြီးစီးသွားရတာလည်းရှိတယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ပြီး ဆန္ဒပြကြရတာတော့ တကယ့်ကို မရေမတွက်နိုင်ပါ။
ပြည်ပကို အင်ဂျီအိုတွေ တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့လာကြတယ်။ သင်တန်းတွေ တမျိုးပြီးတမျိုးပေးကြတယ်။ အစုံပါပဲ။ သင်တန်းဆင်းတွေက ဆရာကြီးတွေ ဆရာမကြီးတွေဖြစ်လာကြတယ်။ မီဒီယာလူတန်းစားပေါ်လာတယ်။ အင်ဂျီအိုကိုယ်ပိုင်တွေဖြစ်လာတယ်။ ဘိုလိုပြောတတ်သူတွေ များလာတယ်။
နှစ်သစ်ကူးပြန်တော့မယ်။ ဆုတောင်းပေးကြသူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပေးသူတွေ ဆုတူရပါစေ။ ဒါက အသက်ရှည်ဘို့နဲ့ကျန်းမာဘို့ ဆုတောင်းပါ။ ကျွန်တော့်လက်တဖက်ကို နိုင်ငံရေးအတွက်သုံးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဆုတောင်းတာ သိပ်မတွေ့မိသလို ဆုပြန်ပေးစရာလဲ ရှားပါးလှတယ်။ နှစ်သစ်မှာ အားမရှိတာကို မပြောစကောင်းလို့ အယူရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်လဲ လိုက်နာပါတယ်။ ဆေးကုရာမှာ ဆုတောင်းတာတခုတည်းနဲ့မရသလို နိုင်ငံရေးမှာလဲ အတူတူပဲ။
ဒီစာရေးခဲ့တာ ၂ နှစ်တိတိကပါ။ ကျွန်တော့်ဆုတောင်းကတော့ လာမဲ့နှစ်မှာ လူမမာနဲ့ဆရာဝန် တွေ့ခွင့်ရချင်တာပါပဲဗျာ။ လူမမာနဲ့ သမားတော် တွေ့ခွင့်ရသွားပါပြီ။ လူမမာမှာ ရောဂါတွေကထူတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တာကြာတော့ နာတာရှည်ကုရမယ်။ လက်သယ်ချည်းသာ အားမကိုး ကိုယ်တိုင်လည်းညှစ်ရမယ်။ စိတ်ကိုအပြုသဘောဆောင်ပါ။ ကံတရားလည်း အားကိုးပါ။ ဝီရိယရှိပါ။
ကျွန်တော် ပြည်ပကိုထွက်ပြေးရတော့ ပုလဲကအိမ်လေးကို စစ်အစိုးရကချိတ်ပိတ်လိုက်လို့ မိသားစုက မုံရွာသွား အိမ်ငှားနဲ့ နေကြရတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေက ကောင်းကြတယ်။ အဒေါ်ကြီးတယောက်က ဒေါ်မြမြအေးကို အကြံပေးတယ်။ အေးရေ့့ မနက်မှာ သူများတွေမနိုးခင်ထ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေ ပြီးစီးအောင်လုပ်ထားရတယ်။ သူများတွေ အိပ်ယာထလောတော့ ဘာမှ မလုပ်ရသလိုနေတဲ့။ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် သနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့ အဝတ်အစားက သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ ချက်စရာပြုပ်စရာတွေက ပြီးနေပြီ။ နေအိမ်လေးလည်း သန့်ရှင်းလို့။
သစ္စာ တမန် = ဆရာ ကျင်လည်ရဲ့အသုံးလေးကိုတင်ပေးပါဦး။ ကျင်လည်ကို ကျွမ်းကျင်မှုလား၊ နေထိုင်စားသောက်မှုလား မကွဲလို့ပါ။ သည်ကောင်က အဲသည်လိုနေရာတွေမှာ ကျင်လည်တယ်ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ နှစ်မျိုးလုံးပါတယ်လို့ထင်မိလို့ပါဆရာ။
ကျင်လည် (နှံ့စပ်) ကျက်စားနေသည်။
လုပ်ငန်းမှာ ကျင်လည် (ကျွမ်းကျင်) သည်။
ကျင် (ဂျင်) ပေါက်ကစားသည်
ရွက်ကျင် (ကြွေ) ရွက်ဟောင်း
ဘဝသံသရာ - ဦးသုခ https://soundcloud.com/khinthidakhin/bawa-thanthayar-u-thu-kha
ရေးထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ သူနာပြုခေါင်းစဉ်နဲ့စာ။ ကျွန်တော်က ဂျာနယ်တခုကနေရတဲ့ပုံကို ယူသုံးထားတယ်။ သူနာပြုကျောင်းသူ ၃ ယောက်ကိုနောက်ကနေရိုက်ထားပြီး သူနာပြုတက္ကသိုလ်ဆိုင်းဘုတ်လည်းပါတော့ အံဝင်တာနဲ့ သုံးတာပါ။
အခုပဲ ကွန်မင့်တခုတက်လာတာကို နိုတီဖီကေးရှင်းကနေ အသိပေးတာနဲ့ ဖတ်ရတယ်။
Paing Thit သူနာပြုတွေပုံကမျက်နှာမပါဘူး နော်
ခနဲ့မှန်း ရှုတ်ချမှန်းတော့ သိပါရဲ့။
တနေ့က ခြင်္သေ့ရုပ်အပေါ်မှာ သစ်ပင်ပေါက်နေတဲ့ပုံကို နာရီဝက်လောက်လိုက်ရှာတယ်။ သင့်တာမတွေ့လို့ ထိုင်းကပုံတခု ယူသုံးလိုက်ရတယ်။ တမြန်နှစ်ကလည်း ထန်းပင်မြစ်မီးဖုတ်တဲ့ပုံကို ဂူဂယ်လ်အင်မေ့ခ်ျမှာ ကြိုက်တာမတွေ့လို့ ပြည်တွင်းက တူတော်မောင်တယောက်ဆီ လှမ်းခိုင်းရတယ်။
မြန်မာပြည်ကပုံတွေကိုသုံးရတာ အတော်ကြီးသတိထားရတယ်။ လူပုံဆို ခွင့်တောင်းရမယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း သွားမရိုက်နိုင်။ မော်ဒယ်နဲ့ရိုက်တာမျိုး မသုံးပါ။
ကြည်အေးပို့စ်အောင်မှာ နာမည်ဆင်တဲ့ အဆိုတော်တယောက်လားလို့ မေးတယ်။
စာပေနဲ့ အနုပညာလောကကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ အများအားဖြင့် အမည်ရင်းမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ရွေးထားကြတဲ့ နာမည်ကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။ အဲတာကို စာပေနဲ့ အနုပညာနယ်မှာသုံးတယ်။ တေးဂီတနယ်လည်းပါတယ်။ Pen name ကလောင်အမည်လို့ ခေါ်တယ်။ လူအများက အဲဒီအမည်ကိုသာ သိတာများတယ်။ တချို့တော့ အမည်ရင်းနဲ့သာရေးကြတယ်။ တချို့က နေရပ် မြို့ရွာနဲ့ တွဲထားတယ်။ တချို့က ရှေ့က တချို့က ကွင်းထဲမှာထည့်ပါတယ်။
လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး၊ သခင်ကိုယ်တော်မိူင်း၊ ကာတွန်း ဘဂျမ်း၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး၊ စစ်ကိုင်း ဦးဘိုးသင်း၊ တက္ကသိုလ် နေဝင်း၊ ဒဂုန်တာရာ၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၊ ကြေးမုံဦးသောင်း။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ နာမည်ရင်းနဲ့ရေးရင် အပြည့်အစုံထည့်သူတွေကထည့်ပါတယ်။ ဥပမာ ချာချီက Winston S. Churchill လို့ရေးတယ်။ Mark Twain မာ့ခ်တွန်းရဲ့ အမည်ရင်းက Samuel Langhorne Clemens ဖြစ်တယ်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပြောကြရင် ပင်ကိုယ်နာမည်ပါတွဲထည့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလောင်နာမည်ခေါ်တာမှာ အပိုအလို မထည့်ရပါ။ အသက်ကြီးလို့ ဦးတင်မိုးလို့ မသုံးရပါ။ ဒေါ်မာမာအေးလို့ မပြောရပါ။ လူချင်းတွေ့လို့ လေးစာသမှုနဲ့တော့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကြည်အေးကို မြို့မကြည်ကြည်အေးနဲ့ မမှားသင့်ပါ။
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၂၆ ပါ။ ချောင်းတွေဆိုးနေတာ သုံးပါတ်ကျော်ပါပြီ။ အခုချိန်ထိမပျောက်သေးလို့ပါ။ ပိုးသတ်ဆေးလဲ ဆရာဝန်ပေးလို့ ၅ ရက်သောက်ထားပါတယ်။ မပျောက်ပါ။ အခုချောင်းဆိုးရင် ချွဲတွေပါလာပြီး မနက်ပိုင်းဆို ချွဲတွေက အညိုပုပ်ပုပ်တွေ သွေးရောင်လိုလိုတွေပါလာတယ်ဆရာ။ မိဘနဲ့ဝေးနေတာမို့ ကူညီပါဆရာ။
လူနာကို မမြင်ရ မစမ်းရသေးပဲ ဆေးကုရမလိုတော့ဖြစ်နေတယ်။ ရင်ပတ် ရှေ့နဲ့နောက်မှာ အထက်ကနေ အောက်အထိ လက်ဝါးတင်ပြီး လက်ချောင်းနဲ့ခေါက် နားထောင်ရမယ်။ နားကြပ်နဲ့ အသက်ရှူသံနားထောင်ရမယ်။ ရေးပြတာတွေအရ အသက်ရှူလမ်းမှာ တခုခုဖြစ်နေတာ။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးက လေပြွန်ကြီးတွေ (သို့) အဆုပ်ထဲက လေပြွန်လေးတွေနဲ့ အဆုပ်တစ်ရှူးတွေရောင်နေတယ်။ ရောင်ရာကနေ ချွဲတွေဖြစ်နေတယ်။
ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဖန်းဂတ်စ်တွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ချောင်းဆိုး၊ သလိပ်ထွက်၊ ကိုယ်ပူ၊ အသက်ရှူသွင်းချိန်မှာ စူးပြီးရင်ပတ်နာတာတွေ ခံစားရမယ်။ နားကြပ်နဲ့ နားထောင်ရင် မူမှန်မဟုတ်တဲ့ Crackling sounds အသံကြားရမယ်။ Wheezing ရင်ကြပ်သံလဲ ကြားရနိုင်တယ်။ လေဝင်သံတိုးနေနိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့် တုပ်ကွေးလိုနဲ့ စတယ်။ ဖျားလာမယ်။ ချမ်းနိုင်တယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်။ သလိပ်ထွက်မယ်။ သလိပ်က အရောင်ရှိနိုင်တယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာအလိုက် လက္ခဏာမတူတတ်ပါ။ တချို့က ချောင်းပိုဆိုးမယ်။ တချို့က အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။ ပြာနှမ်းနေမယ်။ အဆုပ်ကိုဖုံးထားတဲ့အလွှာမှာသာ နာတာကိုခံနိုင်တဲ့အာရုံကြောရှိလို့ အဲဒီနေရာရောဂါလာဖြစ်ရင် နာမယ်။ နာရင်စူးရှပြီးနာတာ။ အဆုပ်မှာ လုပ်ဘ်တွေရှိတယ်။ ဘယ် ၂ ခု၊ ညာ ၃ ခု။ တခုမှာသာဖြစ်တာကို လိုဘာနူမိုးနီးယား ခေါ်တယ်။ အဆုပ်နှစ်ဘက်လုံးမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ထွက်တဲ့သလိပ်ကို စစ်ဆေးရင် ဖြစ်တဲ့ပိုးသိမယ်။ ပိုးကိုနိုင်တဲ့ဆေးကို ရှာနိုင်တယ်။ သွေးဖြူဥတွေ များနေမယ်။ Neutrophils များနေရင် ဗက်တီးရီးယားကြောင့်၊ Lymphocytes များနေရင် ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဖန်းဂတ်စ်၊ တီဘီပိုးကြောင့် ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရင် သိမယ်။ Bronchoscopy ကရိယာထည့် စစ်ဆေးတာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ အဆုပ်အိတ်ထဲ အရည် အောင်း-များနေတာကို Pleural effusion ခေါ်တယ်။ များရင် Thoracentesis လုပ် စုပ်ထုတ်ရမယ်။ Empyema ဆိုတာ ဖြစ်ရင် ခွဲစိတ်တန် ခွဲစိတ်ရတယ်။ Thoracoscope ကရိယာသုံးပြီး Video-assisted thoracoscopic surgery or VATS ဆိုတာ လုပ်လာနိုင်နေပြီ။
အများဆုံးတရားခံက Streptococcus pneumoniae ဗက်တီးရီးယားဘဲ။ အခု Pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) နဲ့ Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23; Pneumovax) ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုး ပေါ်နေပြီ။
Pneumococcal conjugate vaccine ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကားမှာ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေး စာရင်းထဲ ထည့်တယ်။ ၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို ထိုးပေးတယ်။ နူမိုးနီးယား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ လူကြီး (နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးချို၊ အရက်သမား၊ စီးကရက်သောက်သူ၊ ဘေလုံးထုတ်ထားသူ၊ အသက်အိုသူ) တွေကို Pneumococcal polysaccharide vaccine ထိုးပေးတယ်။ ၅-၇ နှစ်ကြာတခါ ထပ်ထိုးတယ်။
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ (သို့) Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ (သို့) Azithromycin 500 mg ပဌမနေ့ ပေးပြီး 250 mg ကို နေ့ ၂-၅ ရက်မှာပေးပါ။
• Amoxicillin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇-၁ဝ ရက်။ (သို့) Fluoroquinolone (Levofloacin) 500 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
• Gatifloxacin 400 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ Sparfloxacin 400 mg စပေးပြီး 200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
• Moxifloxacin 400 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ x ၁ဝ-၁၄ ရက်၊
• Clarithromycin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ x 10 days (သို့) Doxycycline 200 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ x ၁ဝ ရက်၊
ချုပ်လိုက်ရင် ပိုးသေဆေးရွေးပေးရမယ်။ ဖြစ်တာကြာထားလို့ ဆေးသောက်တာ ပိုအချိန်ယူနိုင်တယ်။ ချွဲထွက်တာ ကောင်းတယ်။ ချွဲပျော်တဲ့စေတဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကနေ ချွဲထွက်လွယ်ကူစေမယ်။ ချောင်းဆိုးရတာ ပိုများလာပြီး ချွဲထုတ်ရတာလွယ်လာရင် သက်သာလာတာဖြစ်မယ်။ အစားအသောက် ရှောင်စရာမရှိပါ။
သန်ကောင်ဆိုတာ ပါးစပ်ကနေဝင်တယ်။ သန်ဥပါတာကို မသိပဲစားသောက်မိလို့ကူးစက်တယ်။ သန်ကောင်အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ အများဆုံးဖြစ်တာက သန်လုံးကောင် နဲ့ ပင်အပ်ပုံသန်ကောင်တွေဖြစ်တယ်။ အမျိုးမတူရင် ဆေးပေးတာလဲ မတူပါ။ အများဆုံးဖြစ်တာအတွက် တကြိမ်တည်းနဲ့ပြီးတယ်။ တချို့ကို ၂ ပါတ်အကြာမှာ တခါသောက်ရတယ်။ ပဌမအကြိမ်တုံးက ဥအနေနဲ့ ရှိနေခဲ့တာတွေ အကောင်ဖြစ်လာချိန်မှာ တခါထပ်သန်ချရတာပါ။ ၂ နှစ်အောက်ကို ဆေးတဝက်၊ ၂ နှစ်အထက် ဘယ်လောက်အသက်ကြီးကြီး ဆေးတလုံးသောက်ရတယ်။ ဆေးပြား၊ ဝါးစားရတဲ့ဆေးပြား၊ ဆေးရည်လာတယ်။ တိရစ္ဆာန်သုံးလည်းရှိတယ်။
သန်ကောင်ရှိနေရင် ခံစားရမှာ မတူပါ။ ဗိုက်နာတာ၊ ဝမ်းပျက်တာ နဲ့ စအိုယားတာတွေ။ ကလေးတွေမှာ ပိန်တယ်၊ ဗိုက်ပူတယ်။ ဒါက ဝမ်းပျက်လို့ ဆက်ဖြစ်တာပါ။ ဝက်သား မနူးတာစားလို့ တိပ်ပြာပုံသန်ကောင် ဖြစ်တတ်တယ်။ သေခြာချင်ရင် Stool ME ဝမ်းစစ်ရမယ်။
သန်ချဆေး Albendazole, Albenza, Albazole, Albendol, Albex, Mebendazole နာမည်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
• Roundworm အများဆုံးဖြစ်တဲ့သန်လုံးကောင် = Albendazole 400 mg တကြိမ်တည်း။ (သို့) ၂-၃ ရက်။ အသက် ၂ နှစ်အောက် ထက်ဝက်သောက်။ (သို့) Mebendazole 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်၊ သို့မဟုတ် 500 mg တခါတည်းသောက်။ Piperazine 3.5 Gm x 2-4 days ၂-၄ ရက်။ Livamisole 150 mg တခါတည်းသောက်။
• Pinworms (Enterobius vermicularis) စအိုယားစေသည့် ပင်အပ်ပုံသန်ကောင် = Albendazole 400 mg ညအိပ်ရာဝင် ၁ ကြိမ်။ ၂ ပါတ်နေရင် နောက်တခါထပ်သောက်။ (၃) ခါသောက်စေတယ်။ (သို့) Mebendazole 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်။ ၂ နှစ်အောက် ထက်ဝက်သောက်။
• Giardiasis (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ဝမ်းပျက်ခြင်း = Albendazole 400 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၅ ရက်။
• Hookworm (Ankylostomiasis) ချိတ်သန်ကောင် = Albendazole 400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်ဆက်တိုက်။ သံဓါတ်ဆေးပါ ၂ဝဝ မီလီဂရမ် တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၃ လသောက်။ (သို့) Mebendazole 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက် + Ferrous sulfate 200 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၃ လသောက်။
• Neurocysticercosis အာရုံကြောထဲရောက်သော သံကောင် = Albendazole 400 mg BD လူကြီး တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ Children 15 mg/kg BD x 8-30 days ကလေး တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၈-၃ဝ ရက်သောက်။
• Strongyloides အရေပြားမှတဆင့်ဝင်သော သံကောင် = Albendazole Adult 400 mg OD/BD x3days တနေ့ ၁-၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်သောက်။
• Tapeworm (Echinococcosis, Hydatid disease, Hydatid cyst) တိပ်ပြားပုံသန်ကောင်၊ Albendazole 400 mg တနေ့ (အစာနဲ့) ၂ ကြိမ်၊ ၂၈ ရက်သောက်။ နောက် ၁၄ ရက်မှာတကြိမ်ထပ်သောက်။ (သို့) Praziquantel 10 mg/kg stat dose တကြိမ်တည်းသောက်။
• Threadworm (Seat worm, Strongyloides): Albendazole Adult = 400 mg အရေပြားကတဆင့်ဝင်သည့် သန်ကောင်၊ ညအိပ်ရာဝင် ၁-၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်။ ၂ နှစ်အောက် ထက်ဝက်သောက်။
•Whipworm (Trichuriasis) ကျာပွတ်နှင့်တူသော ဝမ်းပျက်စေသည့် သန်ကောင် = Albendazole 400 mg ညအိပ်ယာဝင် ၁ ကြိမ်၊ ၃ ရက်။ ၂ နှစ်အောက် ထက်ဝက်သောက်။
• Filariasis ဆင်ခြေထောက်သန်ကောင် = Albendazole 400 mg တကြိမ် + Ivermectin 200 μg/kg; 400 mg ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ပါတ်။
Albendazole ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ = ပျို့-အန်၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ Albendazole နဲ့ Mebendazole သန်ချဆေးကို ကိုယ်ဝန်မှာ မသောက်သင့်ပါ။ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို သောက်စေတယ်။ နို့မတိုက်မီ ၁ ကြိမ်ပေးလို့ရတယ်။ Albendazole ဆေးတိုက်ရင် ကလေးကိုယ်အလေးချိန် ၂ဝ ပေါင် အနည်းဆုံးရှိရမယ်လို့ ဆေးသုတေသနကဆိုပါတယ်။
ကဗျာဆရာမ ကြည်အေးရဲ့ အမည်ရင်းက ဒေါ်ကြည်ကြည်တင်မြင့်ဖြစ်တယ်။ ဘီဘီစီကနေ ငွေဗျိုင်းဖြူကဏ္ဍကို တာဝန်ယူခဲ့ဘူးတယ်။ ငွေဗျိုင်းဖြူကဏ္ဍဆိုတာ လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်က အပတ်စဉ် နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ရင်ထိုးလေးတခုတောင်ရှိခဲ့တယ်ထင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ အဲဒီအစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်လို့ ရပ်နားလိုက်ရတယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။ နောက်လူရည်ချွန်ကဏ္ဍဖြစ်လာပြန်တော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီက လူရည်ချွန်စီမံကိန်းလုပ်တော့ ရပ်သွားပြန်တယ်။
ကြည်အေးဟာ ဆရာဝန်လည်းဖြစ်တယ်။ သူ့စာတွေဟာ နူးညံ့တယ်။ ယဉ်ကျေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကနေ ကနေ့ခေတ်အထိမီတယ်။ သူ့စာတွေဟာ သမိုင်းသိသူတယောက်ကနေရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ လေးစားပြီး၊ တန်ဖိုးထားတယ်။ ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လို့လည်း ဂုဏ်ယူတယ်။ သူလည်း အပြင်ကလူ။
ကြည်အေးက နောက်လူတွေအတွက် ကဗျာတွေ စာတွေကို ထားပေးခဲ့တယ်တဲ့။
စိတ်တည်ကြည်လို့ သတင်းမွှေး။ (ကြည်အေး)
မြန်မာပြည်မှာ ကြည်အေးတွေ မွေးပါစေ။ သမီးလိမ်မာတွေမွှေးပါစေ။
Karl Marx, writingaletter to his daughter Lura Marx, on March 20, 1866, said: Most of my time I'm walking and breathing fresh air. I read nothing and write less. I go to bed at 9:00 p.m. Generally, I subside into the state of non-existence that Buddhism considers to be the height of human delicacy. (BUDDHISM & MODERN WORLD P. 35)
၁၈၆၆ ခု၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် Karl Marx သူ့ သမီး Laura Marx ထံသို့ စာရေးလိုက်တာက ငါ့အချိန် အတော်များများမှာ လမ်းလျှောက်တယ်၊ လေကောင်းလေသန့် ရှူတယ်၊ စာဖတ်စာရေး မလုပ်တော့ဘူး၊ ည ၉ နာရီမှာ အိပ်ယာဝင်တယ်။ သာမန်အားဖြင့်တော့ လူ့ဘဝအတွက် အမွန်မြတ်ဆုံး ရသာမွန်ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ သင်္ခါရဓမ္မ၏ အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကို တွေးကြံစဉ်းစားရင်း ငါ အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ (Ven Muni)
ကာလ်မတ်စ်ဟာ ဂျာမန်လူမျိုး ဖီလောဆော်ဖါတဦးဖြစ်တယ်။ ၅-၅-၁၈၁၈ နေ့မှာမွေးဖွားပြီး ၁၄-၃-၁၈၈၃ နေ့မှာ ကွယ်လွန်လို့ သီပေါမင်းပါတော်မမူခင် ၂ နှစ်ကဖြစ်တယ်။ သူ့ကို ကွန်မြူနစ် အိုင်ဒီယော်လောဂျီနဲ့ တွဲသိကြတာများပေမဲ့ Revolutionary socialist ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးသမားလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကြီးတော့ လန်ဒန်မှာ နေထိုင်တယ်။ ဂျာမန် အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Friedrich Engels (ဖရက်ဒရစ် အိန်ဂျယ်လ်စ်) နဲ့တွဲပြီး စာအုပ်တွေ ရေးသားထုတ်ဝေတယ်။ ၁၈၄၈ မှာ The Communist Manifesto ကွန်မြူနစ် မင်နီဖက်စတိုကိုထုတ်တယ်။ Capital, Volume I ခေါ် အရင်းကျမ်းကို ၁၈၆၇ မှာထုတ်တယ်။
ကားလ်မတ်စ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆက်စပ်မှုကို လေ့လာသူအမျိုးမျိုးကရေးကြတာတွေမနည်းလှပါ။ ကျွန်တော်လေ့လာမှု နည်းလွန်းလို့ မှတ်ချက်မပေးလိုပါ။
- When Karl Marx Practised Buddhism http://culturematters.org.uk/index.php/culture/religion/item/2423-when-karl-marx-practised-buddhism
- Karl Marx & Buddhism http://wenshuchan-online.weebly.com/karl-marx--buddhism.html
- Buddhism in the Modern World https://global.oup.com/ushe/product/buddhism-in-the-modern-world-9780195146981?cc=us&lang=en&
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့်။ သမီးက pharmacist တယောက်ပါရှင့်။ တချို့ ယောက်ျားလျာတွေက online shopping ပုံစံနဲ့ testosterone ထိုးဆေးတွေ စားဆေးတွေကို ရောင်းပါတယ်။့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိကြောင်း ပြောကြ ရေးကြပါတယ်။ အချို့ယောက်ျားလျာလေးတွေဆိုတာလည်း အသက်၂၀ပင်မပြည့်သော်ငြား ရဲတင်းကြပါတယ်ရှင့်။ ယောက်ျားဆန်ချင်လွန်းတာကြောင့် ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူသုံးစွဲကြပါတယ်။ ထိုးဆေး ကိုယ်တိုင်ထိုးကြပါတယ်။ သူတို့ သုံးတဲ့ဆေးတွေကို ဆေးဝါး မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိမရှိတော့ သမီးမသိပါဘူးရှင့်။ testosterone အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး သူတို့လေးတွေကို အသိပညာပေးချင်လို့ပါရှင်။
၂။ အသက် ၁၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ အမျိုးသားဟော်မုန်းဆေး သောက်ချင်လို့ပါ။ ညွှန်ပေးပါလားဒေါက်တာ။ လည်စေ့လည်း မထွက်ဘူးဆရာ။ ကန်တော့ အမွေးပေါက်နှုန်းကလည်း နှေးတယ်။ body structure ကလည်း မိန်းကလေးနဲ့ ဆင်နေတယ်။ အဲတာကြောင့် သောက်ချင်တာပါဆရာ။
၃။ ကျွန်တော် အသက် ၂၇ နှစ်ပါ။ လူပျိုပါ။ ကျွန်တော့်ဒူးက သိပ်အားမရှိဘူး။့့ လည်းသူများနဲ့ ယှဉ်ရင် နည်းနည်းသေးတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ သူငယ်ချင်းကအကြံပေးလို့ တက်စထိုရိုး ကျားဟော်မုန်းအားဆေး 10mm ဆေးဗူး အလုံး ၃ဝ ပါတဗူးဝယ်ပြီး တနေ့နှစ်လုံးသောက်တာ ၃ ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်လားဆရာ။ side effect ဘာရှိလည်းသိချင်ပါတယ်။ အဲတာဘာဖြစ်လို့လည်း သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
၄။ ကျွန်တော် အခုအသက်၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူပျိုမဖြစ်သေးပါဘူး။ ချိုင်းမွေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ နှုတ်ခမ်းမွေးလည်း မပေါက်ပါဘူး။ ဆီးစပ်မွေးတောင် နည်းနည်းလေးဘဲ ရှိပါတယ်။ ဝက်ခြံလည်း တခါတလေမှ ရှားရှားပါးပါး ထွက်ပါတယ်။ အသံလဲ မပြောင်းသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လိင်တံနဲ့ ဝှေးစေ့က အလွန်သေးပါတယ်။ သုက်လဲ လုံးဝမထွက်ခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က ဆေးစစ်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်က Testosterone နည်းနေတယ် ထင်ကြောင်းနဲ့ ဆေးစစ်ခိုင်းပါတယ်။ ဆေးစစ်တဲ့အခါ Testosterone ပမာဏဟာ တော်တော်နည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တခြားသွေးစစ်တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို CT Scan ကောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Testosterone ထိုးဆေးပေးပါတယ်။ တလကို တကြိမ်နဲ့ ခြောက်လ ထိုးခိုင်းပါတယ်။ ဆေးထိုးတာလေးလရှိပါပြီ။ တသက်လုံး Testosterone ဆေး သုံးရနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ စားဆေးနဲ့ကော အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား။ အိမ်ထောင်ပြုလို့ ရ-မရနဲ့ ကလေး ရနိုင် မရနိုင်လည်း သိချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလည်း အကြံဥာဏ်ပေးပါခင်ဗျာ။
၅။ ကျွန်မမောင်လေး အသက်၂၅ ပါ။ ၁၈ နှစ်လောက်က ဝှေးစေ့ တလုံးထုတ်ထားပါတယ်။ အခြားသောတဘက်မှလည်း သေးသွားပါသည်။ ကြာရင်အခြောက်စိတ်ပေါက်သွားမှာစိုးပါသည်။ စိတ်ဓါတ်တော့ ကျားစိတ်ရှိပါသည်။ ဟော်မုန်းကြောင့် ပြောင်းနိုင်ပါသလား။ လမ်းညွန်ပေးစေလိုပါသည်။
၆။ ကျွန်တော်အသက်က ၂၄ နှစ်ပါ သူများတွေလို အရွယ်ရောက်ချိန်တွေမှာရော အခုရောပါ အမွှေးအမျှင် နည်းပါတယ်။ ဂျိုင်းမွေးဆို မပေါက်သလောက်ပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ညာဘက်လက်သန်းက ညာဘက်လက် သူကြွယ်ပထမအဆစ်ကို မမှီပါဘူး။ အဲလိုဆိုရင် ကလေးမရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ အခုကျွန်တော် ကလေးမရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ဘက်က ချို့ ယွင်းနေတာများလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲလိုဖြစ်လို့ ကလေးမရနုိုင်ဘူးဆိုရင် ကလေး ရနိုင်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ရပါမလဲခင်ဗျာ။
ဟော်မုန်းအမျိုးပေါင်း (၁၇) မျိုးရှိတယ်။ (တက်စတိုစတီရုံး) ကို ကျားလိင်ဟော်မုန်းလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အကုန်မှန်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးတွေ အမျိုးသမီးတွေမှာလဲ ငယ်ငယ်ကြီးကြီးရှိနေတာဘဲ။ သူ့တန်ခိုးက လိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အင်္ဂါတွေကို ပုံမှန်ဖြစ်နေစေတယ်။ (စတီရွိုက်ဟော်မုန်း) ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ကျားအစေ့ကနေ၊ မိန်းမတွေမှာ မျိုးဥအိမ်ကနေ ထုတ်ပေးနေတယ်။ နည်းနည်းပါပါး (အဒရီနယ်လ်-ဂလင်း) ကနေလဲ ထုတ်သေးတယ်။
သူ့အလုပ်က ၂ မျိုး ရှိတယ်။
၁။ Androgenic properties (အင်ဒရိုဂျင်းနစ်) သတ္တိလို့ ခေါ်တာတွေကတော့ ပင်မ (လိင်အင်္ဂါတွေ) နဲ့ ဒုတိယ-လိင်အင်္ဂါတွေ ဖွံ့ထွားစေတယ်။ အသံသြလာမယ်၊ အမွေးပေါက်တာ ထူးခြားလာမယ်။
၂။ Anabolic properties (အင်နာဘောလစ်) သတ္တိလို့ ခေါ်တာတွေကတော့ ကြွက်သားတွေ ထွားလာစေမယ်။
ဒုတိယ-လိင်အင်္ဂါတွေဆိုတာ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ချိုင်းမွေး၊ ရင်ပတ်မွေး၊ ဗိုက်မွေး၊ ဆီးစပ်မွေးပေါက်၊ မျက်နှာမွေး (မုတ်ဆိတ်၊ ပသိုင်းမွေး) ပေါက်၊ နဖူးပြောင်၊ ပေါင်ရှေ့ကြွက်သားများလာ၊ Adam's apple လည်စေ့ထွက်၊ အသံသြ၊ အရပ်ရှည်၊ အရိုးတွေ ရှည်-မာ၊ ပခုံးကျယ်၊ မျက်နှာ အဆီပြန်၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ ကိုယ်နံ့ထွက်၊ အရေပြားကြမ်းလာ၊ အဆီနည်းလာ။ မိန်းကလေးတွေမှာ ရင်သားထွားလာ၊ နို့သီးကိုဆွရင် သန်မာနိုင်လာ၊ ဆီးစပ်မွေး-ကိုယ်မွေးနုပေါက်၊ ပေါင်နောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေ ပိုသန်လာ၊ တင်ကားလာ၊ ချွေး-အဆီထွက်လာ၊ ကိုယ်နဲ့ရလာ၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ လက်တံပိုရှည်လာ၊ တင်ပါး-ပေါင်တွေမှာ အဆီပိုစုလာ။
တယောက်တည်းမှာလည်း တချိန်နဲ့တချိန် မတူဘူး။ ရာသီဥတု၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အစားအသောက် လိုက်ပြီး အနည်း-အများ ပြောင်းနေတယ်။ သွေးစစ်ရင် မနက်ခင်း စစ်တာကောင်းတယ်။ Steroid ယောက်ျားမှာ ပုံမှန် 270-1070 ng/dl ရှိရတယ်။ (ယူနစ်) တွေက ဓါတ်ခွဲခမ်းတခုနဲ့တခု မတူကြဘူး။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံမှန်ဆိုတာကို ငြင်းနေကြဆဲ ဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးလေး နည်းလေလဲ ဖြစ်တယ်။ ၄ဝ ကျော်ရင် ၁ နှစ်မှာ ဝ့၃% နည်းနည်း လာတယ်။ အသက် ၆ဝ အောက် ယောက်ျား ၂ဝဝ မှာ ၁ ယောက် ဒီဟော်မုန်း နည်းနေတယ်။ အရက်စွဲနေသူ၊ နာတာရှည် ရောဂါတခုခု ခံစားနေရသူ၊ Hemochromatosis သွေးထဲမှာ သံဓါတ်များလွန်းနေသူ၊ Sarcoidosis ကျားအစေ့ရောဂါ ရနေသူ၊ AIDS ရောဂါရှိနေသူ၊ စိတ်ဖိအား များလွန်းနေသူတွေမှာ သူများထက် နည်းနေမယ်။
ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာ လာဖြစ်သလဲ။ ဟော်မုန်းထွက်ရာနေရာမှာ ကင်ဆာဆေး၊ ဓါတ်ကင်ရရင်၊ (ခရိုမိုဇုမ်း) ပုံမှန် မဟုတ်ရင်၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်မိရင်၊ ရောဂါရရင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားအောင် (စတီရွိုက်) ဆေးတွေ တလွဲသုံးရင်၊ ပသိရောင်နဲ့တွဲတဲ့ ကျားအကျောရောင်ရောဂါဖြစ်ရင်၊ အမျိုးသမီးမှာ မျိုးဥအိမ် အလုပ်မလုပ်တော့ရင်၊ ခွဲစိတ်ထုတ်လိုက်ရရင်၊ ကျားအစေ့က သူနေရာ ကပ်ပဲ့အိတ်မှာ ရှိမနေ-ကျမနေရင်၊ ကပ်ပဲ့အိတ် ထိခိုက်မိရင်၊ ဇရာထောင်းလာရင်၊ အဝလွန်ရင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကတည်းက ဒီဟော်မုန်း နည်းရင် ကလေးဟာ လိင်အင်္ဂါ ဖွံ့ထွားမှု နည်းပြီး မွေးလာနိုင်တယ်။ ယောက်ျားလေးဆိုရင် လိင်တံ၊ ကပ်ပဲ့အိတ် သေးငယ်နေမယ်။ မိန်းကလေးလဲ မအင်္ဂါ ပုံပန်းမတူဖြစ်နေမယ်။ ကျားလိုလို မလိုလိုနေမယ်။ သိဘို့ကောင်းတာ တခုက ကျားရယ် မရယ်ဆိုတာ အပြင်ပန်းအမြင်အရ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ Chromosomes ကြည့်ခေါ်ရတာ ဖြစ်တယ်။ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ ဒီဟော်မုန်း နည်းနေရင် လိင်ပိုင်းရင့်သန်မှုတွေ နည်းနေမယ်။ ကြွက်သားထုထည် သေးနေမယ်၊ အသံသြမလာဘူး၊ ကိုယ်မွေးပေါက်တာ ကြမ်း-ထူမလာဘူး၊ ယောက်ျားလေဖြစ်ပေမဲ့ နို့ကြီးနေမယ်၊ လိင်တံနဲ့ ဝှေးစေ့သေးငယ်နေမယ်။ အရွယ်ရလာမှ ဖြစ်တာဆိုရင် လိင်စိတ်နည်းနေမယ်၊ လိင်ဆက်ဆံတာ ခက်နေမယ်၊ ပန်းညှိုးတာ၊ ကလေးမရနိုင်တာ၊ ဆံပင်ကျွတ်မယ်၊ ကြွက်သားလှီမယ်၊ အရိုးအားနည်းမယ်။ မိန်းကလေးမှာဖြစ်ရင် မျက်နှာနီရဲနေမယ်၊ စိတ်တိုမယ်၊ လိင်စိတ် နည်းနေမယ်၊ အိပ်ရေး ပျက်မယ်၊ ကြွက်သားတွေ လှီနေမယ်၊ အရိုးအားနည်းမယ်၊ ဆံပင်ကျွတ်မယ်။
(တက်စတိုစတီရုံး) နည်းနေသူတွေမှာ ယာက်ျား ပန်းညှိုး-ပန်းသေဖြစ်မယ်၊ (ကိုလက်စထော) များမယ်၊ အဝလွန်မယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်ကဲနေမယ်၊ စိတ်မူပြောင်းမယ်၊ အာရုံစိုက်ရတာ ခက်မယ်၊ မှတ်ဥာဏ်လျှော့မယ်၊ လိင်စိတ်နည်းမယ်၊ အရိုးအားနည်းနေမယ်။
အမျိုးသမီးတွေကို ဆေးကုရင် Esterified estrogens and methyltestosterone ပေးတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ဖြစ်ရင် Testosterone Replacement Therapy (TRT) ထိုးဆေးကို ၂ ပတ် ၁ ကြိမ် ထိုးဆေး၊ ဒါမှမဟုတ် Patch ဆေးကပ်ခွါ၊ Gel (ဂျဲလ်)၊ Putty ငုံဆေးတွေ ရှိသေးတယ်။
အများဆုံးသုံးတဲ့ ထိုးဆေးက Testosterone enanthate (TE) ဖြစ်တယ်။ 100-200 mg IM ကို ၂ ပတ် ၁ ကြိမ် ထိုးတယ်။ ထိုးဆေးကို သုံးနေတာကြာပြီ၊ ဈေးလဲချိုတယ်။ Testosterone cypionate (TC) ဆေးကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။ Implantable Testosterone အရေပြားအောက်မှာ ထားလို့ရတဲ့ဆေးကို ၁၉၄၀ ကတည်းက သုံးနေတယ်။ ဆေးတလုံးမှာ 75 mg of crystalline testosterone ပါတယ်။ ၃-၆ လ ခံတယ်။ တခါထည့်ထားရင် ၂-၆ လုံး ထည့်ထားရတယ်။ Transbuccal System သွားဖုံးကနေ စုပ်ယူနိုင်တဲ့ဆေးကို ရှေ့သွားအထက်မှာထားရတယ်။ 30 mg testosterone ပါတယ်။ တနေ့မှာ ၁-၂ ခါ သုံးရတယ်။ Transdermal TRT ဆိုတာက Patch ကပ်ခွါ နဲ့ Gel ဂျဲလ် အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ နေ့တိုင်းသုံးနေရမယ်။ Patch ကို ကပ်ပဲ့အိတ်မှာ ကပ်တာနဲ့ တခြားနေရာမှာ ကပ်ရတာ မတူဘူး။ TRT Gel ဈေးကြီးတယ်။ Testosterone စားဆေး၊ 17--methyltestosterone and fluoxymesterone ပါတယ်။ အသည်းအတွက် သတိထားစရာတွေ ရှိတယ်။ Novel Testosterone Therapy ဆိုတာ ၃ လမှ တခါ ထိုးစရာလိုတာကို အသစ်နည်း ဖြစ်တယ်။ ဥရောပမှာ သုံးနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ အမေရိကားမှာ စမ်းသပ်မှု အဆင့် ၃ အထိရောက်သေးတယ်။ 1000 mg ကို 10-14 ပတ်တခါသာ ထိုးဘို့လိုတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ = ပျို့-အန်၊ ဝက်ခြံပေါက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အစားစားချင်စိတ်များ၊ စိတ်မူပြောင်း၊ အသည်းထိခိုက်၊ ခြေထောက်ရောင်။ လိင်တံမာတင်းနေတာ ပြန်မလျှော့၊ နှလုံးရောဂါရှိနေသူ၊ (ကိုလက်စထော) များနေသူ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နေသူတွေကို မပေးသင့်ပါ။ ဆေးများသွားရင် စိတ်ကြမ်းဝင်တတ်တယ်။ စိတ်မူပြောင်းတတ်တယ်။
High blood pressure သွေးဖိအားများနေတာကို Hypertension သွေးတိုးရောဂါလို့ခေါ်တယ်။ နှလုံးကနေ တကိုယ်လုံးကို စီးလျှောက်နေတဲ့သွေးတွေက သွေးကြောနံရံပေါ်ကို ဘယ်လောက်ဖိအားနဲ့ သက်ရောက်နေသလဲကို တိတိကျကျ တိုင်းတာတဲ့ ကိန်းဂဏန်းဖြစ်တယ်။ ဒီဖိအားများနေတာက စဉ်တိုက်ဆက်တိုက်လို ဖြစ်နေတာမို့ ကြာလာတာနဲ့ သွေးကြောတွေတွေကို ပျက်စီးစေရုံသာမကဘဲ နှလုံးမှာပါရောဂါရလာစေနိုင်တယ်။ သွေးဖိအားကို ထိန်းမထားနိုင်ရင် တချိန်မှာ နှလုံးရောဂါ၊ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ တမျိုးမျိုးရလာစေနိုင်တယ်။
များသောအားဖြင့် ဘာမှမခံစားရသလိုနေပြီး ရုတ်တရက် အသက်ကို ရန်ရှာနိုင်တဲ့ အပြင်းအထန်ရောဂါရတတ်လို့ တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားလို့ တင်စားလေ့ရှိတယ်။ အဲလိုလူမျိုး ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ရှိတယ်။ အပြင်မှာ ဘာမှမဖြစ်သလိုနေပေမဲ့ ကိုယ်တွင်းထဲမှာတော့ နှလုံး၊ အဆုပ်၊ ဦးနှောက်နဲ့ ကျောက်ကပ်တွေကို ထိခိုက်နေတယ်။
• ဘာလို့ သွေးတိုးရတာလဲ
ဝေဒနာသည်အများစုမှာ ဘာလို့ သွေးတိုးလာဖြစ်သလဲ ဆရာဝန်တွေက အကြောင်းရှာမရကြဘူး။ လူကြီးတယောက်ရဲ့ ပုံမှန်သွေးဖိအားဟာ 120/80 ထက်မများရဘူး။ အထက်ဂဏန်းလို့ခေါ်တာက နှလုံးကနေ ညှစ်နေချိန်မှာ ရှိတာဖြစ်တယ်။ အောက်ဂဏန်းဆိုတာက နှလုံးက တခါနဲ့တခါကြား နားနေချိန်မှာရှိတာ ဖြစ်တယ်။ အကြောင်းရှာရတာတွေထဲမှာ ကျောက်ကပ်နဲ့ သူ့အထက်နားကအင်္ဂါမှာ ရောဂါတွေပါတယ်။
လူဦးရေရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံမှာ သတိပေးချက်အဆင့် ရှိနေတယ်လို့ပြောရင် ခြောက်ပြောတာမဟုတ်ပါ။ အထက်ဂဏန်း 120 နဲ့ 139 ကြား၊ အောက်ဂဏန်း 80 နဲ့ 89 ကြား ရှိနေသူတွေပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက သာမန် သွေးဖိအား ရှိနေသူတွေထက် နှလုံးရောဂါရလမ်း ၂ ဆ ပိုတယ်။ ဆရာဝန်ဆီလာရင် လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။
သွေးဖိအား 140/90 နဲ့အထက်ရှိနေပမဲ့ လက္ခဏာတွေ မခံစားရတာ ရှိနိုင်တယ်။ 180/110 ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်အမှတ် ရောက်နေပြီ။ ခဏလေး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ နားလိုက်ပါ။ သွေးဖိအားပြန်တိုင်းပါ။ ဒိထက်မကျရင် အရေးပေါ်ဌာန အမြန် ကြွပါ။ ဦးနှောက်ထိခိုက်တာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ သတိလစ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိနေပြီ။ ခေါင်းတအားကိုက်မယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်ကဲနေမယ်၊ နှာခေါင်းသွေးယိုမယ်၊ အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။
• ဘယ်လိုလူတွေမှာ လာဖြစ်သလဲ
အသက် ၄၅ နှစ်အထိ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေထက် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒိထက်ကြီးရင် အတူတူဖြစ်ကြတယ်။ မိန်းမတွေက အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်လာရင် ပိုဖြစ်တယ်။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်ဖြစ်ရင် နောက်လူလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဆီးချိုရှိနေသူထဲက ၆ဝ% မှာ သွေးတိုးလဲတွဲရှိနေတယ်။
• ဆားနဲ့ သွေးတိုး အမျိုးတော်တယ်
လူတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေ ဆားမရှိရင် အသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သွေးတိုးနဲ့မတည့်ပါ။ ဆားထဲမှာ အများဆုံး ပါနေတာက (ဆိုဒီယမ်) ဖြစ်တယ်။ ဒီဓါတ်ကနေ သွေးဖိအားတက်စေတာသေချာတယ်။ (ဆဲလ်) တွေထဲ ရေပိုအောင်းစေလို့ ကိုယ်ရောင်မယ်။ လူတယောက် တနေ့မှာ (ဆိုဒီယမ်) 1,500 milligrams ထက် များအစားဘို့ဖြစ်တယ်။ သိတဲ့အတိုင်း သူတို့က အာရှသားတွေထက် လူကောင်ကြီးသေးတော့ ကျွန်တော်တို့က ပိုနည်းသင့်သေးတယ်။ အလွယ်ဝယ်စားလို့ရတာတွေ၊ ပြုပြင်စီမံထားတဲ့ အစာတွေကနေ လိုအပ်ချက်ထဲက ၇၅% ရနေတာ သတိထားပါ။
• သွေးတိုးများတာနဲ့ စိတ်ဖိအား
စိတ်ဖိအားများရင် သွေးတိုးများတယ်။ ဘာလို့လဲတော့ အဆက်အစပ်မပြနိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများသူတွေဟာ နှလုံးရောဂါရလမ်းလဲ များတယ်။ ဒီလိုလူတွေက အစားကောင်းကောင်းမစား၊ အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တာတွေလဲ လုပ်ကြတော့ ဆက်စပ်နေတယ်။
• သွေးချိန်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်
ဝတဲ့သူတွေဟာ သူတို့နှလုံးအပေါ်ဖိအား များနေစေလို့ သွေးတိုးဖြစ်ဘို့ များတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်မှာ ဆား လျှော့စားဘို့နဲ့အတူ ကိုယ်အလေးချိန်ချဘို့၊ (ကလိုရီ) ချဘို့ လိုအပ်တယ်။ အဆီလဲလျှော့၊ သကြားလဲ နည်းစေရတယ်။ အသီးအနှံတွေ၊ အသီးအရွက်တွေကို ပိုစားသင့်တယ်။ အဆီလွတ်အသားနဲ့ (ဖိုင်ဘာ) များအစားတွေကို အစားခိုင်းတယ်။ အလေးချိန် ၁ဝ ပေါင်ကျတာနဲ့ အန္တရာယ်ကိုနည်းစေတယ်။
• သွေးတိုးနဲ့ အရက်
အရက်များရင် သွေးတိုးများစေတယ်။ အမေရိကန်နှလုံးအသင်းရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်မှာ အရက်ကို လူတိုင်းလိုလို သောက်နေတဲ့နိုင်ငံမို့ အမျိုးသားတိုင်း ၂ ခါသောက်၊ နဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း ၁ ခါသောက်ထက် မပိုဘို့ပါနေတယ်။ ၁ ခါ သောက်ဆိုတာ ဘီယာ ၁၂ အောင်စ၊ ဝိုင် ၄ အောင်စ၊ အရက် (80-Proof) ၁ အောင်စခွဲနဲ့ အရက် (100-Proof) ၁ အောင်စကို ပြောတာဖြစ်တယ်။
• သွေးတိုးနဲ့ (ကေဖင်း)
(ကေဖင်း) ပါတဲ့ ကော်ဖီ စတာတွေ သောက်ရင် လူက တမျိုးတမည်ဖြစ်သလို သွေးတိုးကိုလဲ တက်စေတယ်။ ယာယီ သဘောတော့ ဖြစ်တယ်။ တနေ့ ၁ ခွက်၊ ၂ ခွက် သတ်မှတ်တယ်။
• သွေးတိုးနဲ့ ကိုယ်ဝန်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ သွေးတိုးတယ်ဆိုတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် နောက်ပိုင်းမှာ အဖြစ်များတယ်။ ဆေးကုသမှု မလုပ်ရင် ဆိုးဝါးတာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဥပမာ PET ကိုယ်ဝန်ဆောင်သွေးဆိပ်တက်ခြင်းမဖြစ်မီအဆင့်) ကနေ မိခင်ရော ကလေးပါ ဆိုးဝါးတာတွေဖြစ်လောစေနိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်သူတွေ ကလေးမွေးပြီး ပြန်ကောင်းပါတယ်။
• သွေးတိုးနဲ့ ဆေးဝါးတွေ
အအေးမိဆေးတွေထဲမှာ Decongestants အမျိုးအစားဆေးတွေ ပါနေတယ်။ ဒီဆေးက သွေးတက်စေနိုင်တယ်။ တခြားဆေးတွေကတော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ၊ (စတီရွိုက်) ဆေး၊ ပိန်ဆေး၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးနဲ့ စိတ်ကျဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ၊ ရုံးတွေမှာ သွေးချိန်တိုင်းရင် အိမ်မှာနေရင်း တိုင်းတာထက် တက်နေတတ်တယ်။ လူနာတွေလဲ ဆေးခန်းလာဘူးကာစ၊ ဆေးခန်းသစ်လာစ၊ ဆရာဝန်-ဆရာမအသစ်နဲ့ ဆေးစစ်ကာစ အချိန်တွေမှာ သွေးချိန် နည်းနည်း ပိုတက်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး တိုင်းတာတာက ပိုသေချာတဲ့ဂဏန်းကို ရစေနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းက အိမ်မှာချည်း အမြဲနေကြတာ မဟုတ်ပါ။ အပြင်နေရလို့ သွေးချိန်တက်တာလဲ သူ့သွေးချိန်ဘဲဖြစ်တယ်။
• သွေးတိုးနဲ့ ကလေး
သွေးတိုးဟာ လူကြီးရောဂါ မှန်တယ်။ ကလေးတွေလဲ မဖြစ်ဘူး မပြောနိုင်ပါ။ ကလေး ဝနေမယ်၊ မိဘတွေမှာ သွေးတိုး ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကလေးလည်း သွေးတက်နေနိုင်တယ်။ ကလေးရဲ့ အသက်၊ အရပ်၊ ကျား-မ မတူရင် သွေးချိန်မတူဘူး။
• သွေးတိုးကို ဘယ်လိုကုသလဲ
အစားအသောက် ရွေးစားတာကြောင့် သွေတိုးကျစေတယ်။ DASH ဆိုတာ Dietary Approaches to Stop Hypertension ကို အတိုကောက်ရေးတာပါ။ အသီးတွေ၊ ဟင်းသီး-ဟင်းရွက်တွေ၊ ဖြူနေအောင်ချွတ်မထားတဲ့အဆံတွေ၊ အဆီလွတ်နို့၊ ငါး၊ ကြက်သား၊ အစေ့အဆံတွေကိုစားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ အမဲသား-ဆိတ်သား၊ အဆီ၊ အချိုတွေ လျှော့စားစေတယ်။ (ဆိုဒီယမ်) နည်းလေ ကောင်းလေဖြစ်တယ်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ သွေးတိုးအတွက်လဲ သက်သာစေတယ်။ ၇ ရက်တပါတ်မှာ မပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း မိနစ် ၁၅ဝ လုပ်သင့်တယ်။ ဥယျာဉ်လုပ်တာ၊ လမ်းတိုလျှောက်တာ၊ စက်ဘီးစီးတာ၊ (အေရိုးဘစ်) လုပ်တာတွေလဲ ပါတယ်။ ကြွက်သား ဆန့်တန်းတာကိုလဲ တပါတ်မှာ ၂ ခါလုပ်သင့်တယ်။
• Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး
သတိပေးချင်တာက ဆီးဆေးဆိုတာ မတူတဲ့ ၂ မျိုး မရောစေချင်ဘူး။ ဆီးကို အတင်းသွားခိုင်းတဲ့ဆေး နဲ့ ဆီးအောင့်လို့ သောက်ရတာ မတူပါ။ သွေးတိုးမှာ ဆီးကို တမင်တကာ သွားစေအောင် လုပ်ရတယ်။ သွေးကျတာမြန်လို့ ပဌမတန်းစားဆေး အနေနဲ့ သုံးလေ့ရှိတယ်။ ဆီးသွားရင် ကိုယ်ထဲကနေ ရေရော၊ ဆားရောထွက်ကုန်စေတယ်။ သတိထားစရာက တချို့ ဆီးဆေးတွေက ပိုတက်ဆီယမ်နည်းစေနိုင်လို့ ကြွက်သားနာတာ၊ အားယုတ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တချို့ဆီးဆေးက ဆီးချိုတက်စေတတ်တယ်။ တချို့မှာ ယောက်ျားလိင်အရေး နည်းစေနိုင်တယ်။
• Beta-blockers (ဘီတာ-ဘလော့ကာ) ဆေး
ဒီဆေးမျိုးက နှလုံးခုန်တာနှေးစေတယ်။ တခြားနှလုံးရောဂါအတွက်လဲ သုံးတယ်။ ဥပမာ Arrhythmia ရောဂါ။ ဒီဆေးမျိုးက အိပ်မပျော်တာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ အားယုတ်တာ၊ ခြေ-လက်အေးစက်တာနဲ့ ယောက်ျား လိင်အားနည်းတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
• ACE Inhibitors (အေ-ဟီ-အီး အင်န်ဟဘစ်တာ) ဆေး
သွေးကြောတွေကို ကျုံ့စေ-ကျဉ်းစေတဲ့ ကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ Angiotensin II ဓါတ်ကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ဒီဆေးမျိုးက ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ၊ အရေပြားအနီစက်ထွက်တာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ (ပိုတက်ဆီယမ်) များတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မပေးသင့်ဘူး။
• ARBs (အေ-အာရ်-ဘီ) ဆေး
ဒီဆေးမျိုးက သွေးကြောတွေကို ကျုံ့စေ-ကျဉ်းစေတဲ့ Angiotensin II ဓါတ်ကို ကိုယ်ကနေထွက်တာကို နည်းစေတယ်။ ဆေးသတ္တိပြဘို့ အချိန်စောင့်ရတယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ ကြွက်သားနာတာ၊ အိပ်မပျော်တာ၊ (ပိုတက်ဆီယမ်) များတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မပေးသင့်ဘူး။
• Calcium Channel Blockers (ကယ်လ်စီယမ်-ချင်နယ်လ် ဘလော့ကာ) ဆေး ဒီဆေးမျိုးကနေ နှလုံးနဲ့ သွေးကြော (ဆဲလ်) တွေထဲကို (ကယ်လ်စီယမ်) ဓါတ်ဆား ဝင်တာကိုနှေးစေမယ်။ (ကယ်လ်စီယမ်) ဓါတ်က နှလုံးကိုပိုညှစ်စေပြီး သွေးကြောကိုကျယ်စေတယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ ရင်တုန်တာ၊ ခြေထောက်ရောင်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အစာနဲ့ သောက်ရတယ်။ အရက်၊ စပျစ်ဖျော်ရည်တွေနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ဘူး။
Vasodilators, Alpha blockers, Central agonists အမျိုးအစားဆေးတွေကိုလဲ သုံးတယ်။ ခေါင်းမူးတာ၊ ရင်ခုန်-ရင်တုန်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
တရားထိုင်တာ၊ ယောဂလုပ်တာ၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာတွေက သွေးတိုးကျဘို့ အထောက်အကူရစေနိုင်တယ်။ တိုင်းရင်းဆေးတချို့က သွေးတိုးကိုပိုတိုးစေတယ်။
• သွေးတိုးနဲ့ ဘယ်လိုစခန်းသွားမလဲ
သွေးတိုးကို ပျောက်သွာအောင် ဆရာဝန်တွေ မစွမ်းသေးပါ။ တသက်တာသွေးတိုးကို ထိန်းနေတတ်အောင် လုပ်နေနိုင်ရင် အသက်တမ်းစေ့ နေနိုင်ပါမယ်။ လူဆိုတာ ရသာ ၆ ပါးကို အာရုံထားကြတယ်။ ရှောင်ရမှာက ငန်တာတပါးတည်းပါ။ ကျန် ၅ ပါး အားကိုးရတာ မနည်းပါ။
• Hypertension (1) သွေးတိုးရောဂါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2008/10/high-blood-pressure.html
• Side Effects of High Blood Pressure Medications http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/side-effects-high-blood-pressure-medications?ecd=wnl_hyp_061313&ctr=wnl-hyp-061313_ld-stry&mb=
စကားမစပ်နဲ့ စကားမဆက် ဘယ်ဟာအမှန်လည်းဆရာ။
ဆက်ကြော (ဇက်ကြော) တင်းနေသည်။
ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ပန်းသီးတလုံးတင်ထားပြီး မြားနဲ့ပစ်စေတဲ့ပုံပြင်တွေ ၄-၅ ခုရှိတယ်။ (ဝီလီယမ် တဲလ်) ပုံပြင်ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ မူရင်းက ဂျာမန်ကဖြစ်ပါတယ်။ William Tell's feat ပုံပြင်လို့တွင်တယ်။ (ဝီလီယမ် တဲလ်) ကတော့ ၁၅ ရာစုကတည်းကပါ။ ၁၈ဝ၄ မှာ ပြဇာတ်ဖြစ်လာတယ်။ (တဲလ်) ဟာ သြစတြီးယန်း (ဗော့ခ်) ကို ဦးညွတ်အလေးပြုဘို့ ပျက်ကွက်လို့ သူ့ကို (အဲလ်ဗတ်ခ်ျ ဂက်စလာ) ကနေ ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ (တဲလ်) ရဲ့သားဦးခေါင်းပေါ်မှာ ပန်းသီးတလုံးတင်ထားပြီး မြားနဲ့ ပန်းသီးကိုမှန်အောင်ပစ်ခိုင်းတယ်။ မြားတံကလည်း တချောင်းပဲ သုံးခွင့်ရှိတယ်။ လေးဆိုတာကတော့ ဒူးလေးဖြစ်တယ်။
အဲဒီနေ့ဟာ ၁၈-၁၁-၁၃ဝ၇ နေ့ဖြစ်တယ်။ ရင်တမမနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးရှေ့မှာ (တဲလ်) ဟာ ပန်းသီးကို မှန်အောင်ပစ်နိုင်လိုက်ပါတယ်။
(တဲလ်) က မြားတံအပိုတချောင်းပါ ယူလာတယ်။ အဲတာကိုမေးတော့ သူ့အကျင့်မို့ပါလို့ လိမ်ညာဖြေမယ်လို့ စဉ်းစားသေးတယ်။ အမှန်ကိုပြောပြရင် ဒုက္ခမပေးပါလို့ အာမခံချက်ရမှ ပြောချလိုက်ပါတယ်။ သူ့မြားချက်က ပန်းသီးကို မထိမှန်ပဲ သူ့သားခေါင်းကိုသာထိမှန်သွားရင် ကျန်တဲ့မြားနဲ့ (အဲလ်ဗတ်ခ်ျ ဂက်စလာ) ကိုအသေပစ်ဖို့ပါတဲ့။
သူတို့သားအဖအပေါ်မှာ သနားစာနာစိတ်ရှိကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးလိုပါပဲ မြန်မာပြည်ထဲက သက်ပြင်းချသံကို အစိုးရသစ် တက်လာတော့ ကြားလိုက်ရတယ်။ တော်သေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာ မြားတချောင်းသာပါတယ်။
Aung Zaw Win စိုစိုပြည်ပြည်နဲ့ စိုစိုပြေပြေ ရှင်းပြပါလားဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရင်ထုတ် သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ စိုပြေရော စိုပြည်ပါ နှစ်မျိုးလုံးရေးထားတယ်။ ခုခေတ်မှာ စိုပြည်လို့ရေးတယ်။
ဆရာ ကျွန်တော်တို့က ၁၉၈၈ မှမွေးတာဆိုတော့ သိပ်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ လူကြီးတွေကလည်း သိပ်မပြောပြကြဘူးလေ။ ဆရာအခုလိုတင်တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဆိုရင် မဖတ်ဖြစ်လောက်ဘူး။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှမွေးဖွါးကြသူတွေက လွတ်လပ်ရေးရစခေတ်ကို မမီလိုက်ကြသလို၊ ကျွန်တော်တို့လဲ ဂျပန့်ခေတ်ကို မမီခဲ့ကြပါ။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ခေတ်က ဆိုးဝါးရက်စက်မှုတွေကို လူကြီးသူမတွေဆီကနေ ကြားနာသိရှိခဲ့ရတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တာတွေလဲ နည်းနည်းသာ ကြားခဲ့ရတယ်။ အဲတော့ စာတွေဖတ်ကြရတယ်။
ဒါပေမဲ့ တပါတီစနစ်တက်လာတော့ စာတွေကိုပိတ်တယ်။ ပိုဆိုးတာက သူတို့အလိုကျ သမိုင်းတွေကို ပြင်ရေးတယ်။ သူတို့ သိစေချင်တာကိုသာ တဖက်သတ်ပြောတယ်၊ ရေးတယ်။ အမိန့်ပေးပြီး လိုက်နာစေခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံနေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းပုံကို ချိတ်လာတယ်။ ၁၉၈၈ နောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပုံကို ပြောင်းချိတ်ခိုင်းတယ်။ မကြာပါဘူး နောက်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတပုံ ရောက်လာတယ်။ သူ့လက်ထက်ကစပြီး တပ်ထဲမှာ သစ္စာဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော့့ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။
တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက်ကနေ စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ မတ်လ (၂) ကိုပြောင်းလိုက်တာကို မသိသူတွေများနေပြီ။ ခေတ်လူရွယ်တွေ တပါတီစနစ်နဲ့ စစ်အစိုးရခေတ်တွေရဲ့ ဆိုးဝါး ယုတ်မာမှုတွေကို သိအောင် လုပ်ကြစေချင်တယ်။ စာတွေဖတ်ကြပါ။ ဒါပေမဲ့ ရွေးဖတ်ကြပါ။ ဆန်းစစ်တတ်မှု အသိဉာဏ်နဲ့သာ ယူကြပါ။ အညာခံရတဲ့ခေတ်မျိုး ထပ်မဖြစ်၊ ဆက်မဖြစ်စေချင်တော့ပါ။
ခေတ်လူတွေမှာ ကံဆိုးကံကောင်းရှိတယ်။ စာတွေပြန်ရေးနိုင်လာလို့ ဖတ်ခွင့်ရလာတာကို အသုံးချသင့်ကြတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့ ဆန်ခါတင်တတ်ဘို့ လိုတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကနေ လိုချင်တဲ့မှိုင်းတိုက်ဘို့ လုပ်ကြတယ်။ အခံနည်းသူတွေအဖို့ အကောင်းနဲ့အဆိုးကို အခွဲရခက်စေတယ်။
ပေးလိုတဲ့အကြံကတော့ မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးနဲ့ ဖတ်ပါ။ လက်နှစ်ဖက်လုံးကို သုံးပါ။ တခုတည်းသောဦးနှောက်ကို သုံးပါ။ တခုတည်းသောနှလုံးသား မာပါစေ၊ ကောင်းပါစေ။